Izincazelo Nezincazelo, Ukucabanga Nokuqothula - Isisekelo Sezwi
Izincazelo Zokucabanga Nezokucabanga
Imigomo nemishwana kusuka Ukucabanga kanye Destiny
Ingozi, i: imvamisa kuthiwa yinto eyenzeka ngokungalindelekile noma umcimbi ngaphandle kwesizathu esibonakalayo. Noma kunjalo, ingozi ukuphela kwengxenye ebonakalayo ochungechungeni noma umbuthano ongenakuqinisekiswa noma owedlule obangela ukungabi nalutho kuho lokho kwenzeka okubizwa ngengozi. Ezinye izingxenye zombuthano imicabango nezenzo ezihlobene nengozi.
I-Aia: yigama lapha elinikezwe kuyunithi elithuthuke ngokulandelana kulo lonke lelo banga ekunakekeleni njengomsebenzi walo eNyuvesi Yezomthetho, emzimbeni ophelele, ongenobulili futhi ongafi; osethweswe iziqu emvelweni, futhi ohlangothini lobuhlakani njengephuzu noma umugqa ukuwuhlukanisa ngakolunye uhlangothi lwevelo.
I-Alcoholism: yisifo se-psychic somenzi wesifiso-nokuzizwa, okulesi sifo umzimba wenyama utheleleke ngokuphuza utshwala. Utshwala buhamba phambili futhi bunokwethenjelwa, ngenkathi bugcinwa njengenceku, noma busetshenziswa njengomphakathi ekwenziweni kwamalungiselelo okwenziwa kwemithi. Kepha utshwala, njengomoya, bunonya futhi abunankani lapho buba yinkosi. Kuyindaba yesikhathi kuphela, kulokhu noma empilweni ethile yesikhathi esizayo, lapho wonke umenzi lapho kuzodingeka abhekane nalesi sihluku futhi anqobe noma anqotshwe yiso. Utshwala abunabungozi, uma umuntu engabuphuzi; kungumxhumanisi kuphela. Kepha uma umuntu ephuza i-t, umoya okuyiwo utshwala osebenza ngawo uthintana nesifiso esegazini futhi u-eeling emithanjeni futhi uhlanganise isifiso nokuzizwa enkolelweni yokuthi ngumngane, futhi le nkolelo iyakhula futhi ikhule. Kungamoya wokuzibandakanya nobudlelwano obuhle kuzo zonke izigaba zokudakwa lapho uhola khona isisulu sakhe. Futhi lapho umenzi ekugcineni ekhohlakele kakhulu ukuthi angathatha isimo somuntu, umkhohlisi uyiholela etilongweni lalo ezingxenyeni ezingaphakathi zomhlaba, lapho ligcinwa khona endaweni engazi lutho. I-inertia eqwashisayo iyakhathaza futhi iyethusa ukwedlula imililo esabekayo yanoma isiphi isazi semfundiso yenkolo noma esinye isihogo ongasicabanga. Utshwala ngumoya olondolozayo emvelweni; kepha ibulala into ekugcinayo. Umoya wokudakwa wesaba i-Conscious Light kumuntu, futhi ulwele ukukhubaza umuntu. Ukuphela kwendlela eqinisekile yokuba yinkosi hhayi isigqila somoya wotshwala ukuthi: Ungayinambitha. Yiba nesimo sengqondo esiqinile nesicacile futhi usethe ukungakuthathi ngaphansi kokuzenzisa noma isimo. Lapho-ke omunye uzoba yinkosi.
Intukuthelo: ukufisa ukushiswa egazini nokwenza ukucasulwa yilokho noma okucabanga ukuthi kungaba yiphutha kuwe noma komunye.
ukubukeka: amayunithi emvelo ahlukaniswe ngobuningi noma ngefomu futhi ayabonakala; kungashintsha noma kunyamalala, lapho lokho okukubambekayo kuguquke noma kuchithwa.
Isifiso: yisifiso sokwanambitha ukunambitheka nephunga ngezinto ezibonakalayo, ekuphenduleni kwesifiso sezinhlangano zemvelo zokugcina izinto zijikelezwa.
Ubuciko: iyikhono ekubonakaliseni imizwa nesifiso.
I-Astral: kuyindaba yezinkanyezi.
Umzimba we-Astral: njengoba igama elisetshenziswe kule ncwadi ukuchaza ukukhanya okuqinile komzimba wenyama omane. Eminye emithathu i-airy-solid, fluid-solid, and solid-solid. Ama-airy-solid and fluid-solid agcwele kuphela abantu, akunjalo
ithuthukiswe yaba yifomu. Umzimba we-astral yilokho okudala udaba lomzimba okhulayo ngokuya ngohlobo lwefomu lokuphefumula kuze kube sekuzalwa. Ngemuva kwalokho, umzimba wenyama uncike kumzimba we-astral ukugcina ukwakheka kwawo kusesimweni
ngokuya ngesimo sefomu lokuphefumula. Ngemuva kokuba ifomu lokuphefumula lishiya umzimba ekufeni, umzimba we-astral uhlala eduze kwesakhiwo somzimba. Lapho-ke umzimba we-astral uncike esakhiweni sokulungiswa, bese usakazeka njenge
Isimo sezulu: isisindo sento esetshenzisiwe esikhanyisa kusuka futhi sizungeze noma yini noma into.
Umkhathi, Umuntu ngokomzimba: isisindo esiyindilinga esibanzi semisebe, i-airy, uketshezi, futhi amayunithi aqinile avela futhi agcinwe ejikeleza ngemisinga emine engaguquki yamayunithi ngaphakathi nangomzimba womoya ngokuphefumula, uhlangothi olusebenzayo lwefomu lokuphefumula.
Isimo Somuntu, Psychic: uhlangothi olusebenzayo lwengxenye yomenzi, ingxenye yemilingo ye-Triune Self, uhlangothi oluzwelayo lwengxenye eyodwa yalo esezinso nasezinhlangeni nasezinhlungwini zokuzithandela negazi lomzimba womuntu. Iyakhuphuka, inamaphawundi, idonsa futhi idlulela ngegazi nezinzwa zomzimba iphendula isifiso nomuzwa womenzi ophinda abe khona emzimbeni.
Isimo Somuntu, Umqondo: ingabe leyo ngxenye yesimo sengqondo se-Triune Self esidlula kumoya osetshenziswayo lapho umuzwa-ingqondo nesifiso-kwengqondo kungacabanga khona ngamaphuzu wokungathathi hlangothi phakathi kokungena okungaphephanga nokuphuma komoya.
Umkhathi, we-One's Triune Self, Noetic: Ngakho-ke, i-reservoir, lapho i-Conscious Light idluliselwa khona ngommoya nangengqondo yomoya kumenzi womzimba womoya ngokuphefumula.
Isimo Somhlaba: sakhiwe ngezindawo ezine eziyindilinga noma izinhlayiya ezinemisebe, i-airy, uketshezi, nezindawo eziqinile ezigcina ukujikeleza okuvela njalo kusuka nokuhlangana komhlaba okuhlanganisiwe nokwindilinga komhlaba, futhi kusuka phakathi nangaphakathi kuya ezinkanyezini ezikude.
Ukuphefumula: Impilo yegazi, i-pervader kanye nomakhi wezicubu, umlondolozi nomchithi, lapho yonke imisebenzi yomzimba iyaqhubeka khona noma idlula ngaphandle, kuze kube ngokucabanga ukuthi yenziwe kabusha futhi iphinde ibuyisele umzimba ku impilo engapheli.
Ifomu lokuphefumula: iyunithi yemvelo eliyindlela yokuphila (yomphefumlo) yomuntu ngamunye yomzimba womuntu. Ukuphefumula kwayo kuyakha futhi ivuselele futhi kunikeze impilo izicubu ngokuya ngephethini elinikezwe yilelo fomu, futhi isimo salo sigcina sesimweni isakhiwo, umzimba waso, phakathi nokuba khona kwalo emzimbeni. Ukufa kungumphumela wokuhlukaniswa kwawo nomzimba.
Iseli, A: yinhlangano eyakhiwa amayunithi omzuzu wezinto ezivela emisebeni enemisebe, yomoya, uketshezi, kanye nemisinga eqinile yento, ehlelwe kusakhiwo esiphilayo ngesenzo esihlobene nesokuphindisela sezingxenye ezine zomqambi: isixhumanisi sokuphefumula,
isixhumanisi sempilo, isixhumanisi sefomu, nezihlanganisi ze-cell-link zakha lelo seli, elingabonakali, hhayi umzimba wamayunithi wesikhashana ahlanganisiwe angabonakala noma abonwe ngaphansi kwesibonakhulu. Amayunithi womqambi amane axhunyiwe
ndawonye futhi nihlale kuleso seli; amayunithi wesikhashana anjengemifudlana egeleza lapho abahlanganisi beqhubeka nokubamba futhi basebenzise amayunithi ethutyana ukungena kuwo nokufana nomzimba walelo cell phakathi kokuqhubeka kwenhlangano enkulu lapho lelo seli liyingxenye yalo. Izakhi ezine zomqambi weseli emzimbeni womuntu azonakaliseki; lapho zinganikezwanga amayunithi abalelwa yisikhashana umzimba weseli uzophela, udilizwe futhi unyamalale, kepha abahlanganisi beseli bazophinda bakhe umzimba ngokuzayo.
Ithuba: igama elisetshenziselwe ukuzithethelela ngokungaziqondi, noma ukuchaza isenzo, izinto kanye nemicimbi eyenzekayo futhi engachazeki kalula, ngokuthi “imidlalo yethuba,” noma “okwenzeka ngengozi.” Kepha ayikho into efana nethuba, ngomqondo wokuthi okwenzekile kungenzeka kwenzeke nganoma iyiphi enye indlela kunakwenzile, ngaphandle komthetho nokuhleleka. Zonke izenzo zamathuba, njengokushintshwa kohlamvu lwemali, ukuphendulwa kwekhadi, ukuphonswa kofile, kwenzeka ngokwemithetho ethile nangokulandelana, noma ngabe kungokwemithetho ye-physics noma yemithetho yokukhohlisa nokukhohlisa. Ukube lokho okubizwa njengethuba bekungaphandle komthetho, bekungeke kube nemithetho ethembekile yemvelo. Lapho-ke bekungeke kube khona ukuqiniseka kwezinkathi, zemini nobusuku. Le yimithetho esiyiqonda kangcono noma esingayiqondi kangako, njengoba kwenzeka “ithuba” nje, esingaziniki ubunzima ukuziqonda.
Isici: izinga lokuthembeka nokuba neqiniso kwemizwa nezifiso zakhe, njengoba kuvezwe ngumcabango wakhe, izwi nezenzo zakhe. Ukwethembeka nokuba neqiniso emcabangweni nasezenzweni yizisekelo eziyisisekelo
umlingiswa omuhle, izimpawu ezihlukanisayo zomlingiswa oqinile futhi ocabangelayo nongesabi. Isimilo sazalwa, sazuzwa njengezimpilo zakho zangaphambili, njengethuba lokucabanga nokwenza; kuyaqhutshwa noma kushintshwe ngendlela umuntu akhetha ngayo.
Inhlanganyelo: ukuziqonda ngokwakho maqondana nokulingana, nokwamukela ukukhanya, ngokohlelo lokucabanga.
Umqondo, waphezulu, “Wokufa” akukhona ukumiswa kwesibeletho kowesifazane, okumele kulandelwe ukuthinteka nokuzalwa komunye umzimba wenyama. Ukuzalwa ngokocansi akunakubangelwa umcabango waphezulu. Umqondo “oyisimangaliso” wangempela wokwakhiwa kabusha komzimba wokufa ongaphelele wobulili ukuze ube ngumzimba wokuphila okuphelele wobulili ongapheli. Lapho amagciwane ayishumi nambili angaphambili ehlanganiswe negciwane leshumi nantathu lenyanga, ekubuyeni kwalo ekhanda, litholakala ngegciwane lonozungezilanga, bese lithola imisebe yokukhanya evela kubuhlakani. Lokho kungukuzibamba, ukuzala kobuNkulunkulu. Ukwakhiwa kabusha komzimba ophelele kuyalandela.
Unembeza: yisamba solwazi mayelana nokuthi yini okungafanele yenziwe maqondana nanoma yisiphi isifundo sokuziphatha. Yindinganiso yomuntu yokucabanga okulungile, umuzwa ofanele, nokwenza okufanele; yizwi elizwakalayo lokulunga enhliziyweni elinqabela noma imuphi umcabango noma isenzo esihlukile kulokho okwaziyo ukuthi kulungile. Igama elithi “Cha” noma elithi “Musa” yizwi lolwazi lomenzi maqondana nalokho okufanele akugweme noma akwenze
noma unganiki imvume yokuthi yenziwe kunoma yisiphi isimo.
Ukuqwashisa: , ngolwazi; izinga lapho lokho okwaziyo ukwazi ngokuqondene nolwazi.
Ukwaziwa: ubukhona bazo zonke izinto — into ngayinye eyazi ngayo ngezinga elaziwa ngalo as yini noma of ukuthi kuyini noma kwenziwa. Njengegama, isiphawulo esithi "yazi" sithuthukiswe saba isibizo ngu
igama elithi “uness.” Ligama elihlukile olimini; ayinazo iziphikiso, futhi incazelo yakhona idlula ukuqonda komuntu. Ukwazi ukuqaphela akuqali, futhi akupheli; ayibonakali, ngaphandle kwezingxenye, izimfanelo, izithi, izimfanelo noma imikhawulo. Kodwa-ke, konke, kusukela kokuncane kuya kokukhulu kakhulu, ngaphakathi nangemuva kwesikhathi nendawo kuncike kukho, ukuba kwenziwe futhi kwenziwe. Ukuba khona kwayo kuyo yonke iyunithi yemvelo nangaphezulu kwendalo kwenza zonke izinto nezidalwa zezwe ziqaphele as yini noma of lokho abayikho, futhi okufanele bakwenze, ukuqaphela nokwazi zonke izinto nezinye izidalwa, futhi bathuthuke ekuqhubekeni kwamazinga aphezulu wokuqaphela ukwazi okuwukuphela kweqiniso Revenue — Consciousness.
Ubuhle: kungukukulungela okungenacala komenzi womzimba ukukholwa ukuthi izinto zinjengoba zivela, nokwamukela njengeqiniso lokho okushiwoyo noma okubhaliwe.
Amasiko: Intuthuko ephezulu yokufunda, ikhono nobuntu babantu, noma impucuko iyonke.
Ukufa: ukusuka kokuzazi emzimbeni kusuka lapho kuhlala khona inyama, ukudonsa noma ukwehlukaniswa kwentambo ecolekile ye-silvery ehlanganisa indlela yokuphefumula nomzimba. Ukuqhekeka kubangelwa ngokuzithandela noma ngokuvuma kwakho ukuthi umzimba wakhe ufe. Ngokuphuka kwentambo, ukuvuselela kabusha akunakwenzeka.
Incazelo: kungukuthi ukwakhiwa kwamagama ahlobene okubonisa okushiwo isifundo noma into futhi, ngokucabanga ukuthi, ulwazi lutholakala kuphi.
Isizalo Somuntu: ukhulunywe ngokwehlukile nangokomfanekiso emibhalweni yasendulo, njengasekuqaleni kwendaba yeBhayibheli ka-Adamu no-Eva Ensimini yase-Edene; ukulingwa kwabo, ukuwa kwabo, isono sabo sokuqala nokuxoshwa e-Edene. Lokhu
kuboniswa njengezigaba ezine ekusukeni komenzi womzimba emzimbeni we-Realm of Permanence. Isuka ku-Realm of Permanence kuleli lizwe lokuzalwa nokufa, bekungokuhluka, ukwahlukana, ukuguqulwa kanye nokuwohloka. Ukuhluka kwaqala lapho umenzi wesifiso nomuzwa enwebisa ingxenye yomzimba wakhe ophelele futhi ebona umuzwa engxenyeni eyeluliwe. Isigaba kwakuwukukwenza kwesifiso somenzi womzimba wesilisa nomuzwa waso emzimbeni wesifazane futhi uzicabange njengamabili esikhundleni seyodwa, nokusuka kwaphakade. Ukuguqulwa kwakuwukwehla noma ukunwebeka kusuka engaphakathi nokuhlanzeka kuya esimweni esingaphandle nesiphansi sendaba nokushintsha kwesakhiwo somzimba. Ukwehla kwezinga kwakuza ekuqothulweni komhlaba ongaphandle, ukuthuthukiswa kwezitho zobulili kanye nesizukulwane semizimba yezocansi.
Isifiso: Amandla okwazi ngaphakathi; kuletha ushintsho ngokwalo futhi lubangele ushintsho kwezinye izinto. Isifiso luhlangothi olusebenzayo lomenzi womzimba, uhlangothi oluzwayo oluzwayo; kepha isifiso asikwazi ukwenza ngaphandle kolunye uhlangothi, umuzwa. Isifiso asibonakali kepha kubonakala ngathi sahlukanisiwe; kufanele ihlukaniswe njenge: isifiso solwazi nesifiso sobulili. Kuyinto, ngomuzwa, imbangela yokukhiqizwa nokukhiqizwa kwazo zonke izinto ezaziwa noma ezenziwa ngumuntu. Njengoba isifiso sobulili sihlala singabonakali, kepha sibonisa ngamagatsha aso amane: isifiso sokudla, isifiso sempahla, isifiso segama, nesifiso samandla, nemiphumela yaso engenakubalwa, efana nendlala, uthando, inzondo , uthando, isihluku, umbango, ukuhaha, isifiso, i-adventure, ukutholwa, kanye nokufeza. Isifiso solwazi ngeke siguqulwe; ihlala ifana nesifiso Sokuzazi.
Isifiso Segama, (Udumo): ingquza yemibonakaliso yezimpawu ezisezingeni eliphakeme zobuntu, ezingasho lutho futhi zibukeka njengebhamuza.
Isifiso Samandla: kungukukhohlisa okudaliwe okuyinzalo kanye nomphikisi wesifiso sokuZazi— (isifiso sobulili).
Isifiso Sokuzazi: isifiso esinqunyiwe nesingavumi sokwenza lowo msebenzi wokuba nobuhlobo obuhle noma ubumbano nalowo owaziyo we-Triune Self.
Isifiso Sobulili: Ubugovu busekelwe ekungazini uqobo lwakho; isifiso esivezwa ngocansi lomzimba okulo, futhi esifuna ukuhlangana ngasohlangothini lwaso olucindezelwe nolungaxelwanga, ngokuhlangana nomzimba wobulili obuhlukile.
Ukuphelelwa yithemba: Ungukuzinikela ukwesaba; ukwesula okungagodliwe ukuze kuvunyelwe kwenzeke.
Isiphelo: isidingo; lokho okumele kube noma ukwenzeka, njengomphumela walokho okuye kwacatshangwa futhi kwenziwa noma kwenziwa.
I-destiny, ngokomzimba: kufaka phakathi konke okuphathelene nefa kanye nomthethosisekelo womzimba wenyama womuntu; izinzwa, ubulili, ifomu, nezimpawu; impilo, isikhundla empilweni, umndeni, nobudlelwano babantu; ubude bempilo futhi
indlela yokufa. Umzimba nakho konke okuphathelene nomzimba yisabelomali sesikweletu nesikweletu esivela empilweni yomuntu edlule njengomphumela walokho akucabangayo futhi wakwenza kulezo zimpilo, nokuthi ubani abhekane nakho empilweni yamanje. Umuntu akakwazi ukubalekela lokho umzimba oyikho nokumelelayo. Umuntu kumele akwamukele lokho futhi aqhubeke enze njengasesikhathini esedlule, noma omunye angashintsha lokho okwedlule abe yilokho umuntu acabanga futhi athanda ukuba yikho, akwenze, futhi abe nakho.
I-Destiny, Psychic: konke okuhlobene nokuzwa-kanye nesifiso njengokuzazi komuntu emzimbeni wakhe; kungumphumela walokho esikhathini esidlule umuntu abe wakufisa futhi wakucabanga futhi wakwenza, futhi kwalokho okuzovela khona esikhathini esizayo
lokho umuntu manje akufisayo futhi akucabangayo futhi akwenzayo futhi okuzothinta umuzwa nomuzwa wakhe.
I-Destiny, Mental: kunqunywa ukuthi yini, ini, nokuthi, nokuthi isifiso kanye nomuzwa womenzi womzimba wakhe ucabangani. Izingqondo ezintathu-ingqondo yomzimba, isifiso-ingqondo, kanye nokuzwa kwengqondo-zifakwa ekusebenzeni komenzi, ngumcabangi we-Triune Self. Ukucabanga okwenziwa ngumenzi ngalezi ngqondo ezintathu kusiphetho sabo somqondo. Isiphetho salo ngokomqondo sisesimweni sayo sokusebenza kwengqondo futhi sihlanganisa isimilo saso sengqondo, isimo sengqondo, ukutholwa kokuqonda nezinye izinto zengqondo.
Isiphetho, uNoetic: inani noma isilinganiso sokuzazi komuntu anakho uqobo njengokuzizwa nesifiso, okutholakalayo, kuleyo ngxenye yesimo sasemoyeni esisezulwini yezengqondo. Lokhu kungumphumela we
ukucabanga komuntu nokusebenzisa amandla akhe okudala nokwakha; kubonakalisa njengolwazi lomuntu ngobuntu nobudlelwano bomuntu ngakolunye uhlangothi, futhi ngakwenye ikusasa lomzimba, njengezinkinga, usizi, izifo, noma
ubuthakathaka. Ukuzazi kukhonjiswa ukuzithiba, ukulawula kwemizwa nezifiso zakho. Isiphetho somuntu somuntu singabonakala ngesikhathi sobunzima, lapho umuntu azi ukuthi yini okufanele yenziwe wena kanye nabanye. Kungase futhi kube njengomqondo wokukhanyiselwa okuthile ngesihloko.
UDeveli, The: isifiso esibi somuntu. Kuyalinga, kudonsa iminjunju futhi kushukumisela umuntu esenzweni esingalungile empilweni yomzimba, futhi kuyahlukumeza ukuthi enye yengxenye yokufa kwayo kulandela.
Ubukhulu: azibalulekile, hhayi isikhala; isikhala asinazilinganiselo, isikhala asilingani. Ubukhulu bungamayunithi; amayunithi ayizinto ezibonakalayo zezindaba ezinkulu; ngakho-ke le ndaba ingukuphakanyiswa, okuhlanganiswa noma njengamayunithi angavikeleki ahlobene futhi ahlukaniswe komunye nomunye ngezinhlobo ezithile zendaba, njengobukhulu. Izinto zingamanani amane: i-on-ness, noma udaba lwangaphandle; i-in-ness, noma i-angle udaba; ngokusebenzisa amandla, noma umugqa wezinto; nokuba khona, noma iphuzu lendaba. Izinombolo zisuka kokucacile futhi kujwayelekile kude.
Ubukhulu bokuqala bamayunithi, ama-on-ness noma amayunithi womphezulu, abunakho ukujula okubonakalayo noma ubukhulu noma ukuqina; kuya futhi ikakhulukazi kudinga ubukhulu besibili nolwesithathu ukuwenza ubonakale, ubonakale, uqinile.
Ubukhulu besibili amayunithi yi-in-ness noma i-angle udaba; kuya ngesilinganiso sesithathu sokuthi icwecwe ubuso bayo endaweni engaphezulu njengobunzima.
Ubukhulu besithathu amayunithi yi -nessness noma umugqa wezinto; kuncike kubukhulu besine okufanele baphathe, baqhube, badlulise, bathathe, bangenise futhi bathumele ngaphandle kwendaba kusukela ezintweni ezingabonakali zobukhulu buse-iness bese belungisa izindawo eziphezulu bese kuthi umzimba uphume futhi uzinze indawo njengendaba yendawo eqinile.
Ubukhulu besine amayunithi ubukhona noma iphuzu lezinto, ukulandelana kwamaphoyinti njengolayini odingekayo wamaphoyinti, lapho khona ubukhulu bokuthi loludaba lwakhiwe lwakhiwa futhi lakhiwa ngalo. Ngakho-ke kuzobonakala ukuthi leyo ndaba engacaciswanga iveza njengokuthi iphuma noma ilisebenzisa iphuzu, futhi njengokulandelana kwamaphoyinti njengodaba lodaba lwamayunithi wamaphoyinti, lapho kusebenza ubukhulu bokuthi amayunithi olandelayo njengodaba lwentambo, futhi esebenzisa okungaphakathi kwayo noma okuyiphutha, okuhambelana nokuphezulu komhlaba kuze kube yilapho into ebonakalayo ebonakalayo iboniswa njengezenzo, izinto kanye nemicimbi yaleli lizwe lenhloso ebonakalayo.
Isifo: Isifo siphuma esenzweni somcabango somcabango njengoba uqhubeka udlulela engxenyeni noma emzimbeni ukuze uthinteke, futhi ekugcineni ukuphuma kwengqondo enjalo kuyisifo.
Ukungathembeki: kungukucabanga noma ukwenza okuphikisana nalokho okwaziwa ngokuthi kulungile, nokucabanga nokwenza lokho okwaziwayo ukuthi akulungile. Lowo ocabanga futhi enze kanjalo angagcina ezenze akholelwe ukuthi okulungile akulungile; nokuthi okungalungile kulungile.
Umenzi: Leyo ngxenye eyazi futhi engahlukaniseki ye-Triune Self eyenzeka njalo emzimbeni womuntu wesilisa noma owesifazane, futhi okuvame ukuzichaza njengomzimba negama lomzimba. Ingxenye yezingxenye eziyishumi nambili, eziyisithupha zazo zingasohlangothini olusebenzayo njengesifiso kanti eziyisithupha uhlangothi lwaso oluzwelayo njengomuzwa. Izingxenye eziyisithupha ezisebenzayo zesifiso ziphinda zivele ngokulandelana emizimbeni yabesilisa kanye nezingxenye eziyisithupha zokuzizwa ziphinde zibe khona ngokulandelana emizimbeni yabesifazane. Kepha isifiso
futhi umuzwa awusoze wehlukaniswa; isifiso emzimbeni womuntu sabangela ukuba umzimba ube ngowesilisa futhi ubuse uhlangothi lwayo lokuzwa; futhi umuzwa emzimbeni wowesifazane wabangela ukuba umzimba wawo ube ngowesifazane futhi ubusa uhlangothi lwayo lwesifiso.
Ukungabaza: yisimo sobumnyama bengqondo njengomphumela wokungacabangi ngokwanele okucacile kokwazi okufanele ukwenze nokungafanele ukwenze esimweni esithile.
Amaphupho: zinhloso nenhlosiphambili. Iphupho eliyinhloso isimo sokuphaphama; nokho kuyiphupho elivukayo. Iphupho eliyilo iphupho lokulala. Umehluko ukuthi ekuvukeni
phupha zonke izinto noma imisindo ebonakalayo noma ezwiwayo futhi ebonakala uyiqiniso ngempela ingaphandle lemicabango yomuntu siqu noma yabanye ngemuva kwephasi lomhlaba; futhi, ukuthi izinto esizibonayo noma esizizwayo ephusheni lokulala ziwukuboniswa kwesizinda sezwe elilandelwayo lokuqagela komhlaba wezinjongo. Ngenkathi siphupha ebuthongweni izinkolelo zingokoqobo kithina njengoba kunjalo nokucabanga komhlaba wokuvuka
manje. Kepha, uma kunjalo, lapho siphapheme asikwazi ukukhumbula ukuthi laliphupho elingakanani iphupho lokulala ngaleso sikhathi, ngoba emhlabeni wokuphaphama umhlaba wamaphupho ubonakala umnyama futhi ungafanele. Kodwa-ke, konke esikubonayo noma esikuzwayo noma esikwenzayo ephusheni ngenkathi silele kuyizinto ezibonakaliswa kakhulu noma ezisonteke kakhulu zezinto ezenzeka kithi nezinto esicabanga ngazo lapho sisesimweni sokuvuka. Iphupho lokulala lingafaniswa nesibuko esibonisa izinto ezibanjwe phambi kwaso. Ngokuzindla ngokwenzeka ephusheni lokulala umuntu angahumusha okuningi ngaye, imicabango yakhe nezisusa zakhe, angazange aziqaphele. Impilo yamaphupho ngomunye umhlaba, omkhulu futhi uhlukahlukene. Amaphupho awakaze, kepha kufanele, ahlukaniswe, okungenani abe izinhlobo nezinhlobonhlobo. Imibuso yangemva kokufa ihlobene nokuphila komhlaba ngandlela-thile njengephupho lokulala esimweni sokuvuka.
Umsebenzi: yilokho umuntu abakweleta wena noma abanye, okumele kukhokhwe, ngokuzithandela noma ngokungathandi, ekusebenzeni lokho kudinga umsebenzi. Imisebenzi ibopha umenzi wesidumbu emzimbeni wempilo ephindaphindwe emhlabeni, kuze kube yilapho umenzi esekhulula
ukwenziwa kwayo yonke imisebenzi, ngokuzithandela nangokuthokoza, ngaphandle kwethemba lokudumisa noma ukwesaba ukusolwa, futhi ngokungatholwa emiphumeleni eyenziwe kahle.
"Dweller": igama elisetshenziselwa ukuchaza isifiso esibi esivela empilweni yangaphambili yomenzi emzimbeni wamanje, esihlala endaweni yemilingo futhi sizama ukungcolisa umzimba futhi sithonye umenzi wezenzo zobudlova, noma ukuhlanganyela ezenzweni ezilimazayo umenzi nomzimba. Umenzi ubhekene nezifiso zakhe, njengomhlali noma njengengubo yemikhuba emibi; izinkanuko zalo azikwazi ukubhujiswa; ekugcineni kufanele bashintshwe ukucabanga nentando.
Ukufa: inqubo esivele ngokuzumayo noma ende yokuthola indlela yokuphefumula yokubutha ifomu layo elihle lisuka emaphethelweni iye enhliziyweni bese izikhukhumeza ngomlomo ngokuphuma komoya wokuphefumula, imvamisa ebangela ukugqabhuka noma umunyu emphinjeni. Ekufeni umenzi ushiya umzimba ngokuphefumula.
Khululeka: kungumphumela wokuthembela komenzi kusiphetho futhi ngokwakhe; ukukhombisa okuthile ngokusebenza, kungakhathalekile ukuthi kunengcebo noma ubumpofu, isikhundla empilweni noma umndeni noma abangane.
I-Ego: umuzwa wokuhlonza u- “Mina” womuntu, ngenxa yokuhlobene nomuzwa wokuhlonza i-I-ness ye-Triune Self yayo. I-ego ijwayele ukufaka ubuntu bomzimba uqobo, kepha i-ego kuphela umuzwa umazisi Uma
umuzwa wawungubani, umuzwa osemzimbeni uyozazi uqobo lwawo njengowukuphela kwegama elithi “Mina” elingapheli nelisebenza ngaphandle kokuqhubeka okungashiwongo, kanti umuntu uqobo akasazi lutho ngokwalo ngaphandle kwalolo
Element, An: ingenye yezinhlobo ezine eziyisisekelo zemvelo yemvelo lapho imvelo yento ihlukaniswe khona futhi lapho yonke imizimba noma izakhi zenziwa khona, ukuze into ngayinye ihlukaniswe ngohlobo lwayo kusuka kwezinye zezinto ezintathu, nokuthi uhlobo ngalunye kungenzeka yaziwe ngesimo sayo nomsebenzi wayo, noma ngabe ukuhlanganisa nokwenza izinto njengamandla emvelo noma ekwakhiweni kwanoma imuphi umzimba.
I-Elemental, An: iyunithi lemvelo eliveza njengelilo lomlilo, noma lomoya, noma lamanzi, noma lomhlaba, ngawodwana; noma njengeyunithi lalinye leseceyini eliningi lamanye amayunithi wemvelo futhi elawula leyo nqwaba yamayunithi.
Elementals, Phansi: yizinto ezine zomlilo, umoya, amanzi, nezindawo zomhlaba, lapha ezibizwa nge-causal, ingosi, ifomu, nezakhiwo zesakhiwo. Yizimbangela, izinguquko, abalondolozi kanye nokubonakala kwazo zonke izinto ezisendalweni okuyinto
Zikhona, okuguqukayo, okuhlala isikhashana, futhi okuzoncibilika nokunyamalale, kuphinde kwenziwe kabusha okunye ukubonakala.
Okuhle, Okuphezulu: bangabantu bomlilo, umoya, amanzi, nezinto zomhlaba, okuvela kuzo abadalwe yi-Intelligences of the sphere, noma ngabakwaFedune Selves ephelele, abakha uHulumeni womhlaba. Zabo
laba bantu abazi lutho futhi akukho abangakwenza. Akuzona izakhi zemvelo ngazinye njengeyunithi yemvelo, kwinqubo yokuthuthuka. Akhiwe ohlangothini olungabonakali lwezakhi zezinto ngokucabanga, futhi aphendule ngokuphelele ekucabangeni kwama-Triune Selves obaqondisa kulokho okufanele bakwenze. Bangabenzi bomthetho, okungekho thixo bemvelo noma amanye amandla angabusa. Ezinkolweni noma emasikweni angashiwo njengezingelosi ezinkulu, izingelosi, noma izithunywa. Basebenza ngokuhleleka okuqondile koHulumeni womhlaba, ngaphandle kokusebenzisa amandla omuntu, noma umuntu oyedwa noma abaningi bengabonakala banikeza umuntu imiyalo, noma ukuletha izinguquko ezindabeni zabantu.
Umzwelo: kungukuvuka nokubonisa isifiso ngamazwi noma ngezenzo, lapho kuphendula imizwa yobuhlungu noma injabulo ngokuzwa.
Umona: umuzwa wentando yobubi noma ukuthukuthela okumunyu kumuntu oyikho noma onakho kulokho omunye umuntu alambele ukuba abe nakho noma ukuba nakho.
Ukulingana Kumuntu: ukuthi umuntu ngamunye ophethe unelungelo lokucabanga, ukuba, enze, enze, futhi abe nakho, lokho akwazi ukuba yikho, ukukwenza, ukukwenza futhi abe nakho, ngaphandle kokuphoqwa, ukucindezelwa noma ukuvinjwa, kuze kufike ezingeni ukuthi akazami
ukuvikela omunye kumalungelo afanayo.
Okuphakade, The: yilokho okungatholwa yisikhathi, okungenakuqala nokungapheli, ngaphakathi nangaphandle kwesikhathi kanye nezinzwa, hhayi ngokuncike, okukhawulelwe noma okulinganiselwe isikhathi nezinzwa zesikhathi esedlule, zamanje, noma ezizayo; ukuthi lapho izinto zaziwa zinjengoba zinjalo, futhi ezingabonakali zinjengoba zinjalo njengoba zinjalo.
Experience: kungumbono wesenzo, into noma umcimbi okhiqizwa ngezinzwa zokuzwa emzimbeni, kanye nokusabela njengokuphendula kokuzwa njengobuhlungu noma injabulo, injabulo noma usizi, noma omunye umuzwa noma imizwa. Isipiliyoni siwumongo wangaphandle kokwenza lowo msebenzi futhi ukufundisa, ukuthi umenzi angakhipha ukufunda kulokho okwenzeka.
Ingaphandle, i: isenzo, into noma umcimbi owawuwumbala ongokomzimba emcabangweni ngaphambi kokuthi ugcotshwe ngaphandle njengesenzo, into noma umcimbi kwindiza ebonakalayo, njengethonya lomzimba.
Amaqiniso: zingamaqiniso ezinhloso noma zezenzo ezilandelanayo, izinto noma imicimbi esezingeni lombuso noma endizeni lapho okuhlangenwe nakho noma okubonwe khona, njengoba kubonakala futhi kuzanywa izinzwa, noma njengoba kubhekwa futhi kwahlulelwa ngesizathu. Amaqiniso ezinhlobo ezine: amaqiniso asemzimbeni, amaqiniso womqondo, amaqiniso emiqondo, namaqiniso we-noetic.
Ukholo: umcabango womenzi owenza umfutho oqinile kufomu lokuphefumula ngenxa yokwethemba nokuzethemba ngaphandle kokungabaza. Ukukholwa kuvela kumenzi.
Amanga: isitatimende njengobufakazi bokuthi yini okungelona iqiniso, noma ukuphikwa kwalokho okukholelwa ukuthi kuyiqiniso.
Udumo, (Igama): iyisiguquki esiguqukayo semibonakaliso yezimpawu ezisetshenzisiwe zobuntu, okuyi-evanescent njengamabhamuza.
Ukwesaba: umuzwa wokufaka isikhuni noma ingozi engenzekayo ephathelene nenkinga yengqondo noma engokomzwelo noma yomzimba.
Ukuzizwa: yilokho komuntu ozaziyo emzimbeni ozwayo; ezwa umzimba, kepha ingazivezi futhi ihlukanise ngokwayo njengomuzwa, womzimba nomuzwa awuzwayo; luwukuphela kokuzenzela komzimba, uhlangothi olusebenzayo oluyisifiso.
Ukuzizwa, Ukuhlukaniswa kwe: kungukukhululeka kwayo ekulawuleni ngokomqondo womzimba kanye nokuziqonda ngokwayo njengesijongo esijabulisayo.
Ukudla: kungokwendalo enezinhlanganisela ezingenakubalwa zamakhompiyutha omlilo, umoya, amanzi, nezingqimba zomhlaba, zokwakhiwa kwalezi zinhlelo ezine nokugcinwa komzimba.
Ifomu: umqondo, uhlobo, iphethini noma idizayini eqondisa nokubukeka futhi ibeke imingcele empilweni njengokukhula; futhi ifomu liphethe kanye nefomethi yefashini ekubonakala njengokubonakala
Inkululeko: isimo noma isimo sesifiso-nomuzwa womenzi wesimo lapho usususondele emvelweni futhi uhlala ungasatholakali. Inkululeko ayisho ukuthi umuntu angasho noma enze akuthandayo, noma ngabe ukuphi. Inkululeko yilena: ukwenza futhi intando nokwenza futhi ngaphandle kokunamathiselwa kunoma iyiphi into noma into yezinzwa ezine; futhi, ukuqhubeka, Lokho kusho ukuthi awunamathiselwe emcabangweni wento noma into yemvelo, nokuthi ngeke uzinamathele ngenkathi ucabanga. Okunamathiselwe kusho ukugqilazwa.
umsebenzi: inkambo yesenzo eyenzelwe umuntu noma into, futhi eyenziwa ngokuzikhethela, noma ngesidingo.
Ukugembula: kungukuqashelwa komuntu umoya wokugembula, noma isifiso esijabulisayo sokuthola, ukuwina imali noma okuthile kwenani “ngenhlanhla,” “ngokubheja,” ngemidlalo “yenhlanhla,” esikhundleni sokuthola umsebenzi othembekile.
I-Genius, A: ungomunye okhombisa ubuqili nekhono elimhlukanisa nabanye ezinkambisweni zomsebenzi wakhe. Izipho zakhe zokwemvelo. Azange zitholwe ngokutadisha empilweni yamanje. Zitholwe ngokucabanga okukhulu nangomzamo ezimpilweni zakhe eziningi zangesikhathi esidlule futhi alethwa kanye naye njengomphumela walokho okwedlule. Izici ezihlukanisayo zobuhlakani zingokwangempela mayelana nemibono, indlela, nendlela eqondile yokuveza ubuhlakani bakhe. Akaxhomekeki emfundisweni yanoma isiphi isikole; Uqamba izindlela ezintsha futhi asebenzisa noma iyiphi ingqondo yakhe emithathu ekuvezeni umuzwa wakhe-kanye nesifiso sakhe ngokusho kwemizwa. Uxhumana nesamba sezinkumbulo zakhe zangesikhathi esedlule emkhakheni wobungcweti bakhe.
Amagciwane, Umhlonyane: kukhiqizwa uhlelo lokuzala futhi luyadingeka ekutholeni umzimba womuntu, ukuba yindawo yokuhlala yomenzi ophinde abe khona. Ibizwa ngokuthi yi-lunar ngoba ukuhamba kwayo emzimbeni kufana nezigaba zenyanga yokuxhuma nokuqina, futhi inobudlelwano nenyanga. Iqala kusuka emzimbeni we-pituitary futhi iqhubeke nendlela yayo yokwehla ngomthambo we-esophagus kanye ne-digestive tract, uma-ke ingalahleki, inyukela ngomgogodla iye ekhanda. Endleleni yayo yokwehla iqoqa ukuKhanya okwathunyelwa emvelweni, futhi okubuyiselwe ngokwemvelo ekudleni okuthethwe ohlelweni lokugaya ukudla, futhi kubutha ukuKhanya okuvela egazini okubuye kwavuselelwa ukuzithiba.
IGerm, i-Solar: yingxenye yomenzi lapho esekhulile esemzimbeni we-pituitary futhi unokukhanya okucacile okuthile. Kwehla izinyanga eziyisithupha, njengelanga, endleleni eseningizimu, ngakwesokunene sentambo yomgogodla; khona-ke iyaphenduka, e-vertebra yokuqala ye-lumbar, bese ikhuphuka ohlangothini lwesobunxele enkambeni yayo yasenyakatho izinyanga eziyisithupha ize ifinyelele emzimbeni wepineal. Ekuhambeni kwayo ngaseningizimu nangasenyakatho ihamba intambo yomgogodla, indlela yokuphila yaphakade. Igciwane lenyanga liqiniswa isikhathi ngasinye lapho lidlula leli gciwane lonozungezilanga.
Ubukhazikhazi: Isimo lapho umuntu ehehwa khona ngento noma into ngesipelingi, izinzwa ezithelisa umuzwa wakhe-nokufisa, futhi okumbambe ethunjiwe, ngakho-ke kumvimbela ekuboneni ubukhazikhazi, nasekuqondeni ukuthi into njengoba empeleni ikhona.
Ubumnyama: yisimo semizwa, sokucabanga ngemizwa nezifiso ezingagculiseki. Kuyo umuntu angadala isimo sobumnyama esizodonsela imicabango yokuqina nokungajabuli, okungaholela ezenzakalweni ezilimazayo kuwe
abanye. Ukwelapha ubumnyama kumcabango wokuzimisela kanye nokwenza okufanele.
UNkulunkulu, A: kungumcabango, odalwe yimicabango yabantu njengommeleli wobukhulu balokho abazizwa noma abakusabayo; njengoba noma yini omunye umuntu angafuna ukuba noma ayithandayo, ukuba ayenze, ayenze.
Hulumende, Ukuzimela, ngokwakho, yisamba semizwa nezifiso zomenzi owaziyo ophakathi komzimba womuntu nokuthi ngubani ophethe umzimba. Hulumende ligunya, kuphatfwa kanye nendlela lapho kubuswa khona umtimba noma umbuso. Ukuzilawula kusho ukuthi imizwa nezifiso zomuntu ezithambekele noma ezingathambekela, ngokuthanda, ukubandlulula noma izinkanuko zokuphazamisa umzimba, kuzovinjelwa futhi kuqondiswe futhi kulawulwe yimizwa yomuntu engcono nezifiso ezicabanga futhi zenze ngokulunga nangokucabanga, njengezindinganiso zegunya ngaphakathi, esikhundleni sokulawulwa yizintandokazi nokungathandwa maqondana nezinto zezinzwa, okuyiziphathimandla ezivela ngaphandle komzimba.
Umusa: ubenzela abanye uthando, futhi akhululeke imicabango kanye nomuzwa ovezwe ebuhlotsheni nasekwenzeni isenzo.
Ubukhulu: usezingeni lokuzimela komuntu onomthwalo wemfanelo nolwazi maqondana nokusebenzelana nabanye.
Ukuhaha: isifiso esingagculisiyo sokuthola, sokuba, nokubamba noma yini oyifunayo.
Umhlaba, Okuvamile: kusetshenziswe lapha ukusho indawo noma umzimba lapho izihlanganisi ezimbili noma ngaphezulu zihlanganela khona. Umhlaba uyindawo yomhlangano yokuthi abenzi bemizimba yabantu basebenze ndawonye ngezinhloso zabo ezifanayo. Umzimba womuntu ungumbandela ojwayelekile wesenzo phakathi komenzi wamayunithi nezakhi zezinto zemvelo ezidlula kuwo. Kanjalo nomhlaba waphezulu uyindawo evamile lapho imicabango yabantu bonke abantu emhlabeni ingaphandle njengezitshalo nezilwane ezikhula futhi zihlale emhlabeni, futhi ezingaphandle zibe izinhlobo zezifiso nemizwa yabantu.
Umkhuba: yisisho ngegama noma isenzo sokukhombisa indlela yokuphefumula ngokucabanga. Ukuphindaphinda kwemisindo eyinqayizivele noma izenzo kuvame ukudala ukungathandeki komuntu nalowo obukeleyo, okungenzeka ukuthi kukhule ngokubabazekayo ngaphandle kokuthi imbangela isuswe. Lokhu kungenziwa ngokungaqhubeki nokucabanga okubangela umkhuba, noma ngokucabanga okuhle ukuthi: “yeka” nokuthi “ungaphindi” - ukuthi igama noma isenzo siyini. Ukucabanga okuhle nesimo sengqondo esikhona ngokumelene nalo mkhuba kuzosiza isithombe esisefomini yokuphefumula, bese kuvimbela ukuphindeka kwayo.
IHholo Lokwahlulela: isimo sokufa lapho umenzi azithola ekuso. Okubonakala sengathi kunehholo lokukhanya empeleni kuyindawo yeConscious Light. Umenzi wethukile futhi wethukile futhi uzophunyuka, noma kuphi, uma kungenzeka; kodwa
ngeke. Iyalwazi uhlobo lokuthi, emhlabeni, eyayikholelwa ukuthi iyilo uqobo, noma ingekho kulolo hlobo; ifomu liyindlela yokuphefumula ngaphandle komzimba wenyama. Ku noma ngale ndlela yokuphefumula i-Conscious Light, iQiniso, yenza i
umenzi wakwazi konke lokho ayekucabangile, nangezenzo azenza ngenkathi esemzimbeni wakhe emhlabeni. Umenzi uyakwazi lokhu njengoba enjalo, njengoba kukhanya kweConscious, iQiniso, kubonise ukuthi kunjalo, futhi umenzi ngokwakhe ubahlulela, futhi
isahlulelo senza kube nesibopho sabo njengemisebenzi ezimpilweni ezizayo emhlabeni.
Injabulo: kungumphumela walokho umuntu akucabangayo futhi akwenzayo ngokuhambisana nokulunga-futhi-isizathu, kanye nesimo sesifiso-nomuzwa lapho besemunyeni olinganiselayo futhi
Ukupholisa Ngokubeka Izandla: Ukusiza isiguli, umphilisi kufanele aqonde ukuthi uyithuluzi elizimisele ukusetshenziselwa imvelo ngenhloso yokwakha kabusha ukugeleza kokuphila okuvinjelwe
noma kuphazanyiswe emzimbeni wesiguli. Lokhu umphilisi angakwenza ngokubeka izintende zezandla zakhe zangakwesobunxele ngaphambili nangasemuva kwekhanda, bese ebuyela kobunye ubuchopho obuthathu, ku-thorax, isisu, kanye
i-pelvis. Ngokwenza kanjalo umzimba womphilisi iyithuluzi lapho amandla kagesi namandla kazibuthe agobhoza futhi afaka imishini yesiguli ukusebenza kwayo ngokuhlelekile ngokwemvelo. Umphilisi kufanele aqhubeke
ukwenza okuhle, ngaphandle kokucabanga ngenkokhelo noma inzuzo.
Ukuphulukisa, Ukucabanga: ngumzamo wokwelapha ukugula ngokomzimba ngezindlela zengqondo. Kukhona izikole eziningi ezizama ukufundisa nokwenza ukwelashwa kwezifo ngokuzikhandla kwengqondo, njengokuphika ukuthi kunokugula, noma ngokuqinisekisa impilo
esikhundleni salesi sifo, noma ngomkhuleko, noma ukuphindaphinda kwamagama noma amabinzana, noma ngomunye umzamo wengqondo. Ukucabanga nemizwa kuthinta umzimba, ngethemba, injabulo, injabulo, usizi, ubunzima, ukwesaba. Ukwelapha isifo uqobo lwaso kungaba
kuthintwe ukulinganiswa komcabango wokuthi isifo kungukukhishwa kwangaphandle kwantoni. Ngokususa imbangela, lesi sifo siyanyamalala. Ukwenqaba isifo kuyinkohliso. Ukube besingekho isifo ngabe asikho ukuphikwa. Lapho kunempilo, akukho lutho olutholwayo ngokuqinisekisa lokho okuyikho vele.
Ukuzwa: iyunithi lomoya, osebenza njengenxusa lezinto zomoya zemvelo emzimbeni womuntu. Ukuzwa kungumzila lapho i-air element yemvelo nohlelo lokuphefumula emzimbeni luxhumana khona. Ukuzwa kuyunithi yemvelo edlula futhi iqondise futhi ibalule izitho zohlelo lokuphefumula, futhi isebenze njengokuzwa ngokuhlangana okuqondile kwezitho zayo.
Izulu: yisimo nesikhathi senjabulo, kungagcini isikhathi sasemhlabeni sezinzwa, futhi okubonakala ngathi akunasiqalo. Luyinhlanganisela yayo yonke imicabango nemibono yokuphila komuntu emhlabeni, lapho kungekho mcabango wokuhlupheka noma
ukungajabuli kungangena, ngoba lokhu njengezinkumbulo kwasuswa kufomu lokuphefumula phakathi nesikhathi sokuhlanzeka. Izulu liqala ngempela lapho umenzi elungile futhi eqala ukuphefumula. Lokhu akubonakali njengesiqalo; kunjengokungathi bekulokhu kunjalo. Izulu liyaphela lapho umenzi edlulile futhi eqeda imicabango emihle nezenzo ezinhle ebekade ezinazo nokuzenza ngenkathi esemhlabeni. Lapho-ke imizwa yokubona neyokuzwa nokunambitha nephunga iyadedelwa kufomu lokuphefumula, bese ungena ezingxenyeni zazo okwakungukukhuluma emzimbeni; ingxenye yomenzi ubuyela ngaphakathi kuyo, isikhathi, lapho ilapho kufika ithuba layo lokuphinda iphinde ibe khona emhlabeni.
Isihogo: isimo esisodwa noma isimo sokuhlupheka, sokuhlushwa, hhayi isenzo somphakathi. Ukuhlupheka noma ukuhlukunyezwa kuyingxenye yemizwa nezifiso ezihlukaniswe futhi zahlatshwa umenzi endimeni yayo ngokusebenzisa i-metempsychosis. Ukuhlupheka kungenxa yokuthi imizwa nezifiso azinazo izindlela zokunciphisa, noma zokuthola lokho ezikusolayo, ezifisayo nesifiso. Lokho kungukuhlushwa kwabo — isihogo. Ngenkathi usemzimbeni wenyama emhlabeni, imizwa emihle nokubi nezifiso zaba nezikhathi zazo zenjabulo nosizi ezazithinteka kuyo yonke impilo yasemhlabeni. Kepha ngesikhathi se-metempsychosis, inqubo yokuhlanzeka ihlukanisa ububi nokuhle; okuhle kuyaqhubeka ukujabulela injabulo yabo engabekezeleleki “ezulwini,” futhi ububi buhlala kulokho okuyihlupheko yokuhlupheka, lapho imizwa nezifiso ezithile zingakhona futhi zihlabeke umxhwele, ukuze kuthi lapho ziphinde zihlanganiswe ndawonye, uma bekhetha, xwaya okubi, uzuze kokuhle. Izulu nesihogo kwenzelwe ukubhekana nakho, kepha hhayi ukufunda. Umhlaba yindawo yokufunda kusuka kulwazi, ngoba umhlaba uyindawo yokucabanga nokufunda. Kwizifunda emva kokufa imicabango nezenzo kunjengokungathi kusephupheni kuphinde kwaphila futhi, kepha akunangqondo noma kucabanga okusha.
Ukuzilolonga: kuvame ukuqondwa njengokusho ukuthi izimfanelo zomzimba nezingokwengqondo, izici kanye nezici zokhokho bakho zidluliselwa kuye futhi zizuzwe yilowo muntu. Vele, lokhu kufanele kube yiqiniso ngezinga elithile ngenxa yokuhlobana kwegazi nomndeni. Kepha ubuqiniso obubaluleke kakhulu abunikezwa indawo. Lokho wukuthi, umuzwa nesifiso somenzi ongafi uhlala emzimbeni womuntu ngemuva kokuzalwa kwakhe futhi uletha ukucabanga kwakhe kanye nobuntu bakhe nawo. Uhlu lozalo, ukuzalanisa, imvelo kanye nososesheni kubalulekile, kepha ngokobungako bayo namandla umenzi uzihlukanisa nalezi. Isimo sokuphefumula somenzi senza ukukhulelwa; ifomu linikezela ngamayunithi womqambi futhi umoya uzakhela isimo sawo impahla enikezwe ngumama, futhi ngemuva kokuzalwa ifomu lokuphefumula liyaqhubeka nokwakha nokugcina ifomu lalo
kuzo zonke izigaba zokukhula nobudala. Umenzi emzimbeni womuntu ngamunye udlula isikhathi. Uhlobo lokuphefumula kwalo luqukethe umlando walo, olawula wonke umlando owaziwayo.
Ukwethembeka: isifiso sokucabanga nokubona izinto njengokukhanya kweConscious lapho ecabanga kukhombisa lezi zinto njengoba zinjalo ngempela bese ubhekana nalezi zinto njengoba iConscious Light ikhombisa ukuthi kufanele kubhekwane nazo.
Ithemba: kungukukhanya okungahle kube khona okwenzeka ku-doer kukho konke ukuzulazula kwalo ehlane lomhlaba; kuholela noma kuholele kokuhle noma kokubi ngokwesimo somenzi; kuhlale kungaqiniseki ngezinto eziphathelene nezinzwa, kepha kuyaqondakala uma ukubusa kunengqondo.
Umuntu, A: Ukwakhiwa kwamayunithi wezinto ezine zemvelo ezahlanganiswa futhi zahlelwa njengamaseli nezitho ezinhlotsheni ezine ezivezwa izinzwa ezine zokubona, ukuzwa, ukunambitha nokuhogela, futhi kuhlanganiswa ngokuzenzekelayo futhi kusetshenziswe indlela yokuphefumula, umphathi ojwayelekile umzimba womuntu noma womfazi; futhi, lapho inxenye yomenzi engena futhi iphinde ibe khona, futhi yenze isilwane sibe ngumuntu.
Izidalwa Zabantu, Amakilasi amane we: Ngokucabanga abantu bazihlukanise ngezigaba ezine. Isigaba esithile umuntu ngamunye akuso, uzifake ngokwakhe ngokucabanga kwakhe; uyohlala kulo inqobo nje uma ecabanga njengoba enza; uyozikhipha kuwo azibeke kunoma yiliphi elinye lamakilasi amane lapho enza ukucabanga okuzombeka ekilasini lapho ezoba elakhe khona. Lezi zigaba ezine yilezi: izisebenzi, abathengisi, abacabangi,
abazi. Umuntu osebenzela ucabanga ukwanelisa izifiso zomzimba wakhe, isifiso nokunethezeka komzimba wakhe, kanye nokuzijabulisa noma ukuthokozisa izinzwa zomzimba wakhe. Umhwebi ucabanga ukwanelisa isifiso sakhe sokuthola inzuzo, ukuthenga noma ukuthengisa noma ukuguqula inzuzo, ukuthola impahla, ukuba nengcebo. Umuntu ocabangayo ucabanga ukwanelisa isifiso sakhe sokucabanga, ukusebenzisa ubuhle, ukuthola, kubuchwepheshe noma ubuciko noma isayensi, nokwenza kahle ekufundeni nakwizinto azifezile. Umuntu owaziyo ucabanga ukwanelisa isifiso sokwazi izimbangela zezinto: ukwazi ukuthi ubani nokuthi yini futhi kuphi futhi nini futhi kanjani futhi kanjani, futhi adlulisele kwabanye lokho yena uqobo akwazi.
Ubuntu: umsuka ojwayelekile nobudlelwano babo bonke abakwenzayo abangafisi futhi abangafi emizimbeni yabantu, futhi umuzwa onozwela kubantu besintu.
I-Hypnosis, i-Self-: kuwukuzibeka ngenhloso yokulala esimeni sokulala ubuthongo ngokuziqagela nokuzilawula ngokwakho. Inhloso yokuzikhohlisa kufanele kube ukuzithiba. Ekuzikhohliseni kokuzenzisa umenzi wenza njengomphikisi futhi njengendaba. Ubheka lokho angathanda ukukwenza angakwazi ukukwenza. Ngemuva kwalokho, esebenza njenge-hypnotist, uziyala ngokucacile ukuthi azokhipha le miyalo kuye lapho elele ubuthongo. Ngemuva kwalokho, ngokusikisela, uzibeka embhedeni ngokuzitshela ukuthi uzolala, ekugcineni ukuthi ulele. Ebuthongweni be-hypnotic uyalela ngokwakhe ukwenza izinto ngesikhathi nangendawo. Lapho eseziyalile kanjalo, ubuyela esimweni sokuphaphama. Vuka, wenza njengoba ecelwe ukuba akwenze. Kulomkhuba umuntu kumele angazikhohlisi nakancane, ngaphandle kwalokho uzodideka futhi ahluleke ukuzithiba.
I-Hypnotism noma i-Hypnosis: yisimo sokulala esikhiqizwayo esihlokweni esizihlupha ngokwaso ukuba silinganiselwe. Isihloko yiso noma sizenza singathandeki kuma-hypnotist, okumele abe nethemba. Isihloko sinikela ngesakhe
umuzwa-kanye-nesifiso somzwelo nesifiso se-hypnotist futhi ngokwenza lokho ukulawula ukuhlinzeka kwakhe uhlobo lokuphefumula kanye nokusebenzisa izinzwa zakhe ezine. Isidlakudla sibonisa indatshana ngokusebenzisa amandla noma amandla akhe kagesi ngokusebenzisa iso noma izwi nezandla zendaba yakhe nangokumtshela kaninginingi ukuthi uzolala nokuthi ulele. Ukuhambisa isiphakamiso sokulala isihloko kufakwa ubuthongo. Ngemuva kokuzithoba, kwakhe
isimo sokuphefumula nezinzwa zakhe ezine ekuphathweni kwe-hypnotist, isihloko sesimweni sokulalela imiyalo futhi senze noma yini eyalelwe yi-hypnotist ngaphandle kokwazi ukuthi wenzani ngempela - ngaphandle kokuthi angeke enzelwe ubugebengu noma enze isenzo sokuziphatha okubi ngaphandle kokuthi uma esesimweni sakhe sokuvuka esenza kanjalo noma enze. Isidlakudla sithatha umthwalo wemfanelo omkhulu lapho sithinta noma ngubani. Isihloko kufanele sihlupheke isikhathi eside sokuzivumela ukuthi silawulwe omunye. Ngamunye kufanele azithibe aze azithibe. Ngemuva kwalokho ngeke alawule omunye noma avumele omunye ukuthi amlawule.
I-Hypnotist, A: ungomunye onentando, umcabango nokuzithemba futhi ophumelela ekubukiseni izifundo zakhe futhi akhiqize izizatho zokulutha ngokwezinga aze alisebenzise ngokuqonda.
"Mina" njengoMazisi, Amanga: umuzwa wobukhona bokuthi ungubani uqobo lwe-I-ness yalowo owaziyo. I-ness ubuwena uqobo lomuntu ozaziyo, ongashintshi futhi ongenasiqalo noma ongapheli kuPhakade.
Ukucabanga ngomqondo womzimba kanye nokuzwa ubukhona bokuthi ungubani uqobo, kudambisa lowo muntu enkolelweni yokuthi kuyefana ngomzimba nezinzwa.
Okuhle: kungukuqonda okungcono kakhulu ukuthi umuntu akucabange, abe, akwenze, noma abe nakho.
Ubunikazi, okukodwa: umuzwa wokuzazi emzimbeni womuntu, umuzwa wakhe njengokufana manje nalokho umuntu ayekade eyikho, nomuzwa ofanayo wokuba ngokuzayo. Umuzwa womuntu wokuzazi uyadingeka futhi uqinisekile kumenzi emzimbeni, ngenxa yokungahlukani kwakhe kusuka ekuzazini komuntu owaziyo i-Triune Self.
I-I -ess: kungukuhlanganiswa okuhlanganayo, okungakhethiyo, futhi okuqhubekayo okungaguquki kwe-Triune Self ekuPhakade; akufakwanga, kepha ukuba khona kwayo kuvumela umuzwa emzimbeni womuntu ukuba ucabange futhi uzizwe futhi uzikhulumele ngokuthi “Mina” futhi uqaphele ukuthi ungubani ungashintshi kuyo yonke impilo eguqukayo yomzimba wakhe ophelele.
Ukungazi: ubumnyama bengqondo, isimo lapho umenzi womzimba akuyo, ngaphandle kolwazi uqobo lwayo nangokulunga nesizathu salo. Imizwa kanye nokukhanuka kwomuzwa wayo kanye nesifiso sekudlulisele ocabangayo nowaziyo.
Ngaphandle kokukhanya kweConscious okuvela kubo kusebumnyameni. Ngeke ihlukanise izinzwa nomzimba okuyo.
I-illusion: Ukuphambuka kwemfashini noma ukubukeka kweqiniso, njengesimanga sokuba yindawo noma isigcawu esiveza kuso, noma okukude kube yindoda; noma yini ekhohlisa izinzwa futhi ibangele iphutha ekwahluleleni.
Ukucabanga: yisimo lapho ukucabanga kokuzwa-kanye nesifiso kunikeza isimo sendaba.
Ukuqagela, Imvelo-: kungukudlala okuzenzakalelayo nokungalawulwa kokuzwakalayo okukhona ngezinkumbulo; ukuhlanganiswa noma ukuhlanganiswa kwezithombe okwenziwe kufomu lokuphefumula izinzwa ngezinkumbulo zokuveliswa okufanayo, futhi leyo nhlanganisela imelela ubuqiniso bendiza ebonakalayo. Lokhu kugcizelela okunamandla kuyaphoqa, futhi kungahle kube nokucacisa izizathu.
I-Incubus: ifomu lowesilisa elingabonakali lifuna ukubuka phansi noma ukuba nobuhlobo bobulili nowesifazane lapho elele. Ama-Incubi anezinhlobo ezimbili, futhi kunezinhlobo zohlobo ngalunye. Okuvame kakhulu i-incubus yezocansi, enye yisifudumezi esizama ukubona umuntu wesifazane, njengakulokho okubizwa ngokuthi yiphupho ebusuku, lelo phupho elibi lingaba kakhulu ngenxa yokuqunjelwa noma ukuphazamiseka ngokomzimba. Uhlobo lwe-incubus luzoya kumikhuba yokucabanga kanye nemodi yokusebenza yalowo olele ngesikhathi sokuphila kwakhe kokuvuka. Uhlobo lwe-incubus, uma lwalubonwa ngamehlo, lwaluyohlukahluka kunolo lwengelosi noma unkulunkulu, udeveli noma isicabucabu noma isikhova.
Imvelo in the Animal: Amandla okushayela avela kumuntu okuleso silwane. Ukukhanya okuvela kumuntu, okuboshwe yisifiso, yilokho okuqondisa noma ukuhola isilwane ezenzweni zalo, ngokuya ngemizwa emine yendalo.
Ubuhlakani: kungukuthi bonke ubuhlakani buhlobene ngabo futhi obuhlukanisa futhi buhlobise futhi busungule ubudlelwane bazo zonke izidalwa komunye nomunye eziqondayo ukwazi; futhi, ngazo, ngamazinga awo ehlukene ngokwazi, ukuhlaba umxhwele, ukwahlukanisa nokuhlobanisa wonke amayunithi noma amasunithi amayunithi ezihlobeni zawo.
Ubuhlakani, An: ungokuhleleka okuphezulu kakhulu kwamayunithi ku-Universe, ophathelene ne-Triune Self yomuntu ne-Supreme Intelligence ngokusebenzisa ukukhanya kwayo kokuzazi, okuvumela ngayo umuntu ukuthi enze kanjalo futhi kumenze akwazi ukucabanga.
Ubuhlakani, Amakhono we: Kuneziyisikhombisa: ukukhanya kanye ne-i-i-master amakhono alawula umkhakha womlilo; isikhathi nezisusa zamakhono ezilawula umkhakha womoya; isithombe namakhono amnyama emkhakheni wamanzi; kanye nekhono lokugxila emkhakheni womhlaba. Ikhanda ngalinye linomsebenzi walo namandla alo nenhloso yalo futhi lihlobene ngokungafani nezinye. Ikhono elikhanyayo lithumela ukukhanya emhlabeni ngokusebenzisa i-Triune Self yalo; isikhathi
ubuhlakani yilokho okudala ukumiswa noshintsho kumayunithi emvelo ebuhlotsheni bawo. Ubuhlakani bezithombe buhlaba umxhwele umbono wefomu odabeni. Ubuhlakani obugxile babeka amanye amakhono esihlokweni esikuyo
iqondiswe. Ubuhlakani obumnyama buyamelana noma bunikeze amandla kwamanye amandla. Ubuhlakani bezisusa bunikeza injongo nesiqondiso emcabangweni. Ubuhlakani be-I-I-Self buqobo lobuhlakani. Ubuhlakani bokugxila buwukuphela kwento ethinta umzimba ngomenzi womzimba.
Ubuhlakani, Ophakeme: umkhawulo kanye nesilinganiso sokugcina esingaphakanyiswa yunithi elihlakaniphile ukuze siqaphele njengeyunithi. Ubuhlakani obusezingeni eliphakeme bufanekisa futhi buqonda bonke obunye ubuhlakani emikhakheni. Akuyona inkosi yabanye ubuhlakani, ngoba ama-Intelligences azi wonke umthetho; bangumthetho futhi i-Intelligence ngayinye iyazibusa futhi icabange futhi yenze ngokuvumelana nomthetho wendawo yonke. Kepha ubuhlakani obuphezulu bunabo ekuphatheni nasekugadeni
yonke imikhakha kanye nomhlaba futhi uyazi onkulunkulu nezidalwa kuyo yonke indalo.
Ingqondo: ukufundisa, ukufundisa ngaphakathi; ulwazi oluqondile olufika ngesizathu kumenzi. Akukhathalekile ukuhweba noma izindaba zezinzwa, kepha ngemibuzo yokuziphatha noma ngezifundo zefilosofi, futhi kuyaqabukela. Uma umenzi evula ukuxhumana nomuntu owaziyo, angaba nolwazi kunoma yisiphi isihloko.
Isifiso: umuzwa nomuzwa wokufisa womenzi, azi iqiniso uqobo ngokwalo, njengoba uqobo; hhayi njengobukhona, hhayi ebukhona, kepha ebunyeni bayo obuvela ekuzilandeleni kwayo ngamabomu kusuka ekukhohlisweni kwendalo.
Umona: ukwesaba okucasulayo nokwenqatshelwe kokungatholi noma ukuba namalungelo omuntu kuzintshisakalo noma izintshisekelo zomunye noma zabanye.
Joyousness: kuwukubonakaliswa kwemizwa nesifiso salowo umuntu athembela kuye.
Ubulungisa:isenzo solwazi maqondana nesihloko esidingidwayo, futhi ekwahlulelweni kukhulunywa futhi kuchazwe njengomthetho.
Karma: imiphumela yezenzo kanye nokuphendula kwengqondo nesifiso.
Knower, The: yilokho i-Triune Self enakho futhi okungokoqobo nokwangempela kwangempela, kungokwesikhathi futhi nakoPhakade.
Ulwazi lunezinhlobo ezimbili: ulwazi lwangempela noma lokuzazi nomqondo- noma ulwazi lomuntu. Ukuzazi kwe-Triune Self akunakuqhathaniswa futhi akunakuqhathaniswa futhi kuvamile kubazi bawo wonke ama-Triole Selves. Akuncike emithanjeni yize kufaka konke okwenzekile emhlabeni; lokhu kuthinta konke kusuka kwelunithi elincanyana elithuthukisiwe lemvelo kuya kumuntu owazi konke i-Triune Self yemihlaba phakathi naso sonke isikhathi sePhakade. Kungumqondo wangempela futhi ongashintshi owutholakala ngasikhathi sinye ngemininingwane emincane kakhulu futhi njengomunye ohlobene ngokuphelele futhi ophelele.
Ulwazi lweSense, isayensi, noma ulwazi lomuntu, yisamba esiqoqiwe futhi ohlelwe ngaso sonke isikhathi amaqiniso emvelo abonwa njengemithetho yemvelo, noma okuhlangenwe nakho okwenziwa ngabasebenza ngemizwa engafundiwe nemizimba engaphelele. Futhi ulwazi nezitatimende zemithetho kufanele ziguqulwe ngezikhathi ezithile.
Ulwazi Lomenzi: uwumongo wokufunda komenzi ngokucabanga. Ukukhanya kukhululwe ekunamathiselwe kukho futhi kubuyiselwa esimweni sezulu esimnandi, ekulinganiseni kwemicabango yayo, akufinyeleleki futhi akunakufinyeleleka, ngakho-ke ulwazi; akulona “ulwazi” lomuntu.
Ulwazi loCabanga we-Triune Self: kufaka lonke ulwazi oluphathelene nokuphathwa komthetho nobulungiswa kumenzi wayo, nasekuxhumaneni komenzi nakwabanye abakwenzayo emizimbeni yabantu, ngabacabangayo.
Bonke abacabangayo bayawazi umthetho. Bahlala bevumelana njalo nabanye futhi nabazi babo ekuphathiseni ikusasa labo abakwenza emizimbeni yabantu. Ulwazi lwabo ngomthetho nobulungiswa luvimbela ukungabaza futhi luvimbele ukuthi kungenzeka ukuthi babe nokukhetha. Umenzi kuwo wonke umzimba womuntu uthola isiphetho sawo njengoba enza. Lokho wukuthi, umthetho nobulungiswa.
Ulwazi Lwazi Lwesithathu, Ukuzazi: uhlanganisa futhi wamukele konke okukhona emhlabeni omane. Njengobugovu ulwazi, futhi njengoba i-Iess lukhomba futhi kungukuhlonishwa kwalolo lwazi. Isebenzile
ukufundela imvelo njengeyunithi yemvelo. Kwakuyilapho okwaziyo khona as Isebenza ngokulandelana kuyo yonke ingxenye yomshini wemvelo wesikhathi. Ngenkathi iba yi-Triune Self ekukhanyeni Okuzazi Kokuqonda Kwayo kwePhakade, wonke
umsebenzi owazi ngokulandelana ngokulandelana kwesikhathi utholakala ngasikhathi sinye, awunamkhawulo ngesikhathi, kuPhakade. I-ness yalowo owaziyo ikhomba umsebenzi ngamunye futhi iyisazisi lelo phiko lalikwazi ngalo, nobugovu balowo owaziyo futhi ulwazi lolo nalowo msebenzi ngokwehlukana, njengasesikhathini, futhi konke kuhlangene kuPhakade. Lolu lwazi luhanjiswa kumcabangi ngemiqondo ye-I-ness nobugovu, futhi lungahle lutholakale kumenzi njengonembeza ngokulunga, nangokuqonda ngokomqondo.
Ulwazi, uNoetic (Umhlaba Wolwazi): yakhiwe ngemibhakabhaka yemibono yabo bonke ababazi be-Triune Selves. Lapho, lonke ulwazi lwazo zonke iziqu ze-Triune Self luyatholakala nasenkonzweni yabo bonke abanye ababaziyo.
Umthetho: umuthi wokusebenza, owenziwe imicabango kanye nezenzo zabenzi bawo noma abenzi bawo, futhi lapho ababhalisile beboshelwe kuzo.
Umthetho Wezemvelo, A: isenzo noma umsebenzi weyunithi eyazi njengomsebenzi wayo kuphela.
Umthetho Wokucatshangelwa, The: ukuthi yonke into endizeni ebonakalayo ingaphandle komcabango okufanele ulinganiswe yilowo owukhiqize, ngokwesibopho sakhe nangokuhlangana kwesikhathi, isimo
Umthetho Wokucatshangelwa, Ukuphela. Amagama we: Umuntu ngamunye ungumenzeli wokuhle noma wobubi ngenhloso yakhe empilweni nokuthi ucabangani futhi wenzani. Ngokwalokho akucabangayo nokwenzayo, umuntu uzilungiselela ukuthi usetshenziswe abanye. Abantu abakwazi ukusetshenziswa noma ukuphoqwa ukwenza ngokungahambisani nezinhloso zabo zangaphakathi, ngaphandle kokuthi bazilinganise ngemicabango nangezenzo zabo. Ngemuva kwalokho bathonywa ukuba benze noma bavune abanye abantu, ikakhulukazi uma bengenayo
injongo eqondile empilweni. Labo abanenhloso futhi bangamathuluzi, ngoba, noma ngabe yini inhloso, kuzofanela okuhle noma okubi kuHulumeni wezwe ngabameli bomthetho.
Ukufunda: kungumnyakazo wesipiliyoni okhishwe kulokho ngokucabanga, ukuze ukukhanya kungadedelwa nokuthi isipiliyoni asidingi ukuphindwa. Ukufunda kuyizinhlobo ezimbili: ukufunda ngqondo njengolwazi, ukuhlola, ukubuka, kanye nokuqoshwa kwalezi njengezinkumbulo eziphathelene nemvelo; futhi, ukufunda ukwenza njengomphumela wokucabanga ngokwakho njengokuzizwa-nesifiso kanye nobudlelwane babo. Imininingwane yokufunda inkumbulo ingahlala ngokuphila komzimba kepha izolahleka ngemuva kokufa. Lokho okwenziwa ngumfundi ngokwako njengokwehlukaniswe nomzimba ngeke kulahleke; lokho ngemuva kwalokho kuzoba nomenzi wezimpilo zayo emhlabeni njengoba ulwazi lwayo lwasendalweni.
U-Liar, A: ngulowo othi kuyiqiniso lokho aziyo ukuthi akunjalo, akunamanga.
Inkululeko: ukuvikela ukungaboshwa noma ukugqilazwa, kanye nelungelo lomuntu lokwenza njengoba ethanda, inqobo nje uma omunye engaphazamisi ilungelo nokukhethwa okulinganayo komunye.
Ukuphila: iyunithi lokukhula, isithwali sokukhanya ngokusebenzisa ifomu. Impilo isebenza njenge-ejenti phakathi kokungenhla nokungaphansi, okuletha inhlawulo enkulu kakhulu futhi kuphinde kwakhiwe kabusha futhi kuguqulwe amandla amakhulu kube ngukucwilisa kabusha. Kuyo yonke imbewu kukhona into yokuphila. Emuntwini kuyindlela yokuphefumula.
UkuphilaUkuqonda Okubaluleke Kakhulu): kuyinto engaphezulu noma engaphansi yobusuku obunzima, uchungechunge olusobala olungokoqobo kodwa olungacacisiwe lwesikhathi sokudonswa ngokuzumayo noma okude, okwenzeka kakhulu noma okucace bha kakhulu — i-phantasmagoria.
Ukukhanya: yilokho okwenza izinto zibonakale, kepha kepha zona ngokwazo ngeke zibonwe. Kuhlanganiswa amayunithi wokukhanya kwenkanyezi noma ukukhanya kwelanga noma ukukhanya kwenyanga noma ukukhanya komhlaba, noma ukuhlanganiswa noma ukubuyiswa kanye nokuvezwa kwalokhu njengogesi noma njengokuhlanganiswa kwamagesi, uketshezi noma ugesi.
Ukukhanya, Okunamathayo futhi Okungafinyeleleki: kungukukhanya kweConscious Light of the Intelligence okubolekwe ku-Triune Self, esetshenziswa ngumenzi womzimba ekucabangeni kwayo. Ukukhanya okunamathiselwe yilokho umenzi akwenzayo ukuthumela emvelweni ngemicabango nangezenzo zakhe, abuyele futhi futhi futhi futhi futhi. Ukukhanya okungafinyeleleki yilokho umenzi akubuyisile futhi wakwenza ukuba kungatholakali, ngoba unokulinganisela imicabango lapho ukuKhanya bekukuyo. Ukukhanya okwenziwa kungafinyeleleki kubuyiselwa esimweni somuntu somuntu futhi kutholakala kulowo njengolwazi.
Ukukhanya, Ukuqwashisa: kungukukhanya okutholwa yi-Triune Self kusuka kubuhlakani bayo. Akuyona imvelo noma kuboniswe imvelo, noma kunjalo, lapho ithunyelwa emvelweni futhi ihlanganiswa namayunithi emvelo, imvelo ibonakala ibonakala
ubuhlakani, futhi kungabizwa uNkulunkulu ngokwemvelo. Lapho, ngokucabanga, ukukhanya kweConscious kuguqulwa futhi kubambelele kunoma yini, kukhombisa ukuthi leyo nto ibe njengoba injalo. Ngakho-ke i-Conscious Light iyiQiniso, ngoba iqiniso libonisa izinto okufanele zibe yikho
njengoba zinjalo, ngaphandle kokukhetha noma ukubandlulula, ngaphandle kokucasha noma ukuzenzisa. Zonke izinto zenziwa zaziwe yizo lapho zijikelwa futhi zibambelele kuzo. Kepha i-Conscious Light ifukanywa futhi ifihlwe yimicabango lapho umuzwa wokufuna nokuzizama uzama
ukucabanga, ngakho umuntu wenyama ubona izinto ngendlela afuna ukuzibona ngayo, noma ngezinga leqiniso leqiniso.
Ukukhanya ku-Doer, Okungabakhona: Lapho umuntu enza imisebenzi ngokunganaki, ngokunganaki futhi engathandi ngoba kuyimisebenzi yakhe, hhayi ngoba ezosiza noma azitholele noma azikhiphe, ulinganisa imicabango yakhe eyenza leyo misebenzi wakhe imisebenzi, nokuKhanya akhulula lapho imicabango ilinganisele kumnika umuzwa omusha wenjabulo yenkululeko. Kumnika ukuqonda ngezinto nezinto angazange azwisise ngaphambili. Njengombana aqhubeka nokukhulula uKwakhanya abekade eboshelwe khona ezintweni azifisa nabazifunako, uthoma ukuzizwa nokuzwisisa ukukhanya okungaba kukuKhanya okukuye futhi okuzoba yiConscious Light uqobo lapho eba yi-Intelligence.
Ukukhanya Kwemvelo: ukusabela njengokukhanya, ukucwazimula, ukugqama noma ubukhazikhazi bezinhlanganisela zamayunithi wemvelo, kuLwazi Lokukhanya oluthunyelwe emvelweni ngabenzi bemizimba yabantu.
Isixhumanisi Seyunithi, Ukuphefumula-: iyabamba futhi iphathe amayunithi adlulayo endaba ekhazimulayo, futhi iyisixhumanisi lapho umoya uxhunywe khona nengxenye yokuxhumanisa impilo yeseli layo.
Isixhumanisi Seyunithi, Ukuphila-: iyabamba futhi iphathe amayunithi adlulayo endaba yomoya, futhi iyisixhumanisi impilo exhunywe kuso nama-form-link namayunithi okuphefumula
Isixhumanisi Seyunithi, Ifomu-: iyabamba futhi iphathe amayunithi adlulayo entweni engamanzi, futhi ixhunywe ne-cell-link kanye nama-life-link amayunithi eseli layo.
Isixhumanisi Seyunithi, Iseli-: iyabamba futhi iphathe amayunithi adlulayo wento eqinile, futhi axhunywe ngayo ngamanye amaseli esithweni noma engxenyeni yomzimba okuyo.
“Umphefumlo Olahlekile,” A: Lokho okubizwa ngokuthi "ngumphefumulo olahlekile" akuyona "umphefumulo" kepha kuyingxenye yengxenye yomenzi, futhi akuhlali unomphela, kepha kuphela okwesikhashana, kulahlekile noma kunqunyiwe kubukhona bayo nakwezinye izingxenye zomenzi. Lokhu kwenzeka lapho, kwesinye sezimo ezimbili, ingxenye yabenzi iye yaqhubeka ebugqilini besikhathi eside futhi isebenzisa ukuKhanya okubolekwe kukho ngokukhwabanisa ngamabomu, ukubulala, ukucekela phansi, noma unya kwabanye futhi isibe yisitha esintwini. Lapho-ke ukuKhanya kuyakhishwa futhi ingxenye yabenzi iyeke ukubakhona; ithatha umhlalaphansi emagumbini omhlaba oqweqwe lokuzihlukumeza ize ikhathale, futhi ingabuye ivele emhlabeni. Icala lesibili lapho ingxenye yomenzi ichithe ukukhanya ngokuzijabulisa ngokweqile, ukuminza, iziphuzo nezidakamizwa, futhi ekugcineni kube yisilima esingalapheki. Lapho-ke leyo ngxenye yabenzi iya ekamelweni elisemhlabeni. Lapho ihlala ize ivunyelwe ukuqhubeka nokutholakala kwayo kabusha. Kuzona zozimbili lezi zikhathi, umhlalaphansi ngowokuphepha kwabanye, kanye nokwakhe.
Uthando: yi-Conscious Sameness ngemihlaba; kumenzi womuntu, kungukuzizwa-nesifiso futhi njengenye ngaphakathi nakuye uqobo nesifiso-nokuzizwa kwakho ngaphakathi nakwezinye.
Uthando kuMenzi: yisimo sobumbano olinganiselayo nokuxhumana phakathi kokuzizwa-nesifiso, lapho ngamunye ezizwa futhi efisa ukuba khona futhi uqobo uqobo nakulo omunye.
Amanga Nokungathembeki: Isifiso sokungathembeki nokuqamba amanga yizinto ezimbili ezikhethekile zobubi; zihamba ndawonye. Lowo okhetha ukungathembeki nokuqamba amanga nguyena okuthi ngemuva kokuhlangenwe nakho okude ezimpilweni wehlulekile ukubona izinto zinjengoba zinjalo
futhi ukuhumushe kabi akubonile. Ubone ikakhulukazi izinhlangothi ezimbi zabantu futhi waziqinisekisa ukuthi bonke abantu banamanga futhi abathembekile, nokuthi labo okukholakala ukuthi bathembekile futhi baneqiniso bahlakaniphile ngokwanele ukufihla ukungathembeki kwabo nokufihla amanga abo. Lesi siphetho sidala inzondo nokuziphindisela nokuzicabangela wena wedwa; futhi lowo uba yisitha esintwini, njengesigebengu esiqondile noma njengomuntu okhaliphile
futhi uceba ngokucophelela abanye ukuze kuzuze yena. Noma ngabe umuntu angaba yisiqalekiso esikhulu kangakanani emhlabeni, imicabango yakhe njengesiphetho sakhe ekugcineni izomvezela umhlaba kanye naye. Ngokuhamba kwesikhathi uzofunda ukuthi ukwethembeka nokuba neqiniso emcabangweni nasezenzweni kukhombisa indlela yokuzazi.
Ukulimaza:ukukhathazeka ngumoya wentando nenhloso embi ukulimaza, ukudala ukuhlupheka; kuyisitha sentando enhle nokwenza okulungile.
Izindlela: Imikhuba emihle itholakala kumlingiswa womenzi; ziyathuthukiswa, azixhunyelelwa. Ukupholisha okungaphezulu ngeke kufihle ikhwalithi yemikhuba emihle noma emibi, noma ngabe isiphi isikhundla somenzi empilweni.
Indaba: kuyinto ebonakaliswa njengamayunithi angenakho ukuhlakanipha njengendalo, futhi, ethuthuka iba ngamayunithi ahlakaniphile njengo-Triune Selves.
Okushiwo: inhloso emcabangweni oveziwe.
Okuphakathi, A: igama elijwayelekile elisho ishaneli, izindlela, noma ukuhanjiswa. Lapha kusetshenziselwa ukuchaza umuntu onomzimba okhazimulayo noma we-astral ophuma futhi ukhiphe umoya oheha noma yimaphi ama-sprite emvelo amaningi, ama-elemental, noma azulazulayo emazweni asemva kokufa futhi afuna abaphilayo. Umxhumanisi ngaleyo ndlela usebenza njengendlela yokuxhumana phakathi kwalowo nalowo owenzayo emizimbeni yabantu.
Imemori: ukukhiqizwa komqondo yilokho okushiwo khona. Kunezinhlobo ezimbili zememori: memory-memory, kanye ne-doer-memory. Kokukhumbula inzwa kunezigaba ezine: inkumbulo yokubona, inkumbulo yokuzwa, inkumbulo yokunambitha, nenkumbulo yokuhogela. Isethi ngayinye yezitho zemizwa emine ihlelelwe ukuthatha ukuvela kwento leyo engummeleli wayo, nokudlulisa okuvelayo kulokho okulotshwe kukho, nokuthi kukhiqizwe kanjani futhi; kumuntu, kuyindlela yokuphefumula. Ukukhiqizwa komqondo kuyinkumbulo.
Imemori, i-Doer-: ukukhiqizwa kabusha kwezimo zomuzwa-nesifiso sayo emzimbeni waso wamanje, noma kunoma yimiphi imizimba yangaphambilini eyake yahlala kulo mhlaba. Umenzi akaboni, akezwa, akanakunambitha noma unuke. Kepha ukubona, imisindo, ukunambitheka, nephunga elihlaba umxhwele efomini lokuphefumula lisabela ekuzweleni nasekufisweni komenzi futhi kuveza ubuhlungu noma injabulo, injabulo noma usizi, ithemba noma ukwesaba, ukwesaba noma ukudangala. Le mizwa iyizinkumbulo zabenzi bezimo zenjabulo noma zokudangala eye yakuthola. Kunezigaba ezine zenkumbulo yabenzi: i-psycho-physical, okungukuphendula kokuzizwa-nokulangazelela izehlakalo zomzimba zempilo yamanje; izinkumbulo zengqondo, okungukuphendula kwe
ukuzwa-nokulangazelela izindawo nezinto, noma eziphikisayo, ngenxa yezimo ezifanayo ezake zaba khona ezimpilweni zangaphambili; izinkumbulo zengqondo, ezithinta imibuzo yokulungile nokungalungile noma ukuxazululwa kwezinkinga zengqondo noma
ukulungiswa kwezimo zokuphila okungazelelwe noma ezingalindelekile; kanye nenkumbulo ye-psycho-noetic, ethinta ulwazi lobunikazi, lapho isikhathi siphela ngomzuzwana futhi umenzi ekwazi ukuzihlukanisa yedwa
kungakhathalekile yonke impilo nokufa okuye kwadlula kukho.
Imemori, Ukuzwa-: kufaka (a) izitho zeso, njengekhamera okuzothathwa ngayo isithombe; (b) umuzwa wokubona lapho ukubona okusobala nokugxila okumele kwenziwe ngakho; (c) into engeyinhle noma ipuleti okuzokhangiswa kuso isithombe futhi isithombe esizophinda senziwe kabusha; kanye (d) nalowo owenza ukugxila bese ethatha isithombe. Iqoqo lezitho zokubona iyinsimbi yomshini esetshenziselwe ukubona. Ukubona kuyunithi yemvelo esemqoka esetshenziselwa ukudlulisa okuvelayo noma isithombe esigxile kwifomu lokuphefumula. Umenzi ngumboni obona isithombe sigxile esimweni somoya. Ukukhiqizwa kabusha noma inkumbulo yalesi sithombe ngokuzenzakalela futhi kwenziwa ngomshini ngokuhlangana nento okufanele ikhunjulwe. Noma iyiphi enye inqubo yengqondo iphazamisa noma ivimbela ukukhiqizwa okulula noma inkumbulo. Njengomqondo wokubona nezitho zawo zokubona, kunjalo nangokuzwa nokunambitha nephunga, kanye nokuzala kwabo njengezinkumbulo. Ukubona imemori ebonakalayo noma yezithombe; ukuzwa, imemori ezwakala noma yezwi; ukunambitha, inkumbulo ekhangayo; nokuhogela, inkumbulo olfactory.
Isimo Sengqondo Nesethi Yengqondo:Isimo sengqondo somuntu yindlela umuntu abheka ngayo impilo; kufana nomoya onenhloso ejwayelekile yokuba noma ukwenza noma ukuba nokuthile. Isimo sakhe sengqondo siyindlela ethile nezindlela zokuba noma zokwenza noma zokuthola noma yini leyo nto ethile, enqunyiwe nelethwe ngokucabanga.
Ukusebenza Kwengqondo: yindlela noma indlela noma ukusebenza kwanoma iyiphi yezingqondo ezintathu ezisetshenziswa ngumenzi-emzimbeni.
I-Metempsychosis: yisikhathi ngemuva kokuthi umenzi eshiye iHholo Lokwahlulela kanye nendlela yokuphefumula, futhi ungena futhi adlule kwinqubo yokuhlanzwa, lapho ehlukanisa khona izifiso zayo ezibangela ukuhlupheka, ezifisweni zayo ezingcono ezenza kube mnandi. I-Metempsychosis iphela lapho lokhu sekwenziwe.
Ingqondo: ukusebenza kwezinto ezihlakaniphile. Kunezingqondo eziyisikhombisa, okungukuthi, izinhlobo eziyisikhombisa zokucabanga yi-Triune Self, enokukhanya kwe-Intelligence, -kodwa zimunye. Zonke izinhlobo eziyisikhombisa kufanele zisebenze ngokomthetho owodwa, okungukuthi, ukubamba ukukhanya ngokuqinile endabeni yokucabanga. Yilezi: umqondo wokuzibona kanye nengqondo yokuzimela kokwazi; ingqondo yokulunga nengqondo yokucabanga kocabangayo; ingqondo yokuzwa kanye nengqondo yesifiso somenzi; nengqondo yomzimba nayo esetshenziswa ngumenzi wemvelo, kanye nemvelo kuphela.
Igama elithi "ingqondo" lapha lisetshenziswe njengalowo msebenzi noma inqubo noma into okwenziwa ngayo noma okwenziwa ngayo ukucabanga. Yigama elijwayelekile lapha lezingqondo eziyisikhombisa, futhi ngakunye kwalaba abayisikhombisa kungasohlangothini lwesizathu somcabangi weTriune Self. Ukucabanga kungukubambelela okungaguquki kweLight Conscious ngendaba yokucabanga. Ingqondo ye-I-ness kanye nengqondo yobumina isetshenziswa yizinhlangothi zombili zokwazi i-Triune Self. Ingqondo yokulunga nengqondo yokucabanga kusetshenziswa nguscabangi weTriune Self. Ingqondo yokuzwa kanye nengqondo-yesifiso nomqondo womzimba kufanele kusetshenziswe ngumenzi: okubili kokuqala ukuhlukanisa umuzwa nesifiso emzimbeni nasemvelweni futhi babe nobunye obulinganiselayo; ingqondo yomzimba kufanele isetshenziswe ngezinzwa ezine, zomzimba kanye nokuhlobana kwayo nemvelo.
Ingqondo, Umzimba-: Inhloso yangempela yomqondo womzimba ukusetshenziswa komuzwa-nokulangazelela, ukunakekela nokulawula umzimba, nangomzimba ukuqondisa nokulawula imihlaba emine ngezinzwa ezine nezitho zazo umzimba. Ingqondo yomzimba ingacabanga ngezinzwa kuphela nangokwemigomo ebekelwe izinzwa nodaba oluvusa inkanuko. Esikhundleni sokulawulwa, ingqondo yomzimba ilawula imizwa-nesifiso ukuze bangakwazi ukuzihlukanisa nomzimba, futhi ingqondo yomzimba ilawula ukucabanga kwabo kangangokuba baphoqeleke ukuthi bacabange ngokwezinzwa kunokuba imigomo efanele umuzwa nesifiso.
Ingqondo, Umuzwa-: yilokho umuzwa ocabanga ngakho, ngokwemisebenzi yawo emine. Lokhu kungukuqonda, ukucabanga, ukuhleleka, kanye nokuqagela. Kepha esikhundleni sokuzisebenzisela ukuzikhulula ngokwaso ebugqilini bemvelo, zilawulwa ngengqondo yomzimba ngemvelo ngezinzwa ezine: ukubona, ukuzwa, ukunambitha, nokuhogela.
Ingqondo, Isifiso-: isiphi isifiso okufanele sisisebenzise ukuyala nokulawula imizwa uqobo; ukuhlukanisa njengesifiso emzimbeni okuso; futhi, ukuletha ubumbano lwalo ngomuzwa; esikhundleni salokho, izivumele ukuthi ibe ngaphansi futhi ilawulwe ngumqondo womzimba osebenzela izinzwa nezinto zemvelo.
Isimilo: bazimisele ngokwezinga lokuthi imizwa nezifiso zomuntu ziholwa yizwi elingenamsindo kanembeza enhliziyweni maqondana nalokho okungafanele kwenziwe, nangokwahlulela okunengqondo, ngokufanele ukwenze. Lapho-ke, ngaphandle kokuheha kwemizwa, ukuziphatha komuntu kuzobe kuqondile futhi kulungile, ngokuzihlonipha yena nokucabangela abanye. Ukuziphatha komuntu kuzoba isizinda sesimo sakhe sengqondo.
Imfihlakalo: ukukholelwa noma umzamo wokuhlangana noNkulunkulu, ngokuzindla noma ngokuthola ukusondela, ubukhona noma ukuxhumana noNkulunkulu. Izimfihlakalo zivela kuzo zonke izizwe nezinkolo, kanti ezinye azinayo inkolo ekhethekile. Izindlela noma imikhuba yabo iyahluka kusuka ekuthuleni kuthule kuye ekuzivocavoca umzimba okunodlame kanye nokubabaza nokusuka ekuhlukaneni ngakunye kuye ekubonisweni kwabantu abaningi. Ama-Mystics athembekile ezinhlosweni nasezinkolelweni zawo futhi aqotho ekuzinikeleni kwawo. Bangakhuphuka ngokumangala okungazelelwe bafinyelele ezindaweni eziphakeme kakhulu, futhi bacwile ekujuleni kokucindezeleka; okuhlangenwe nakho kwabo kungaba kufushane noma kuthathe isikhathi eside. Kepha lokhu okuhlangenwe nakho kwemizwa nezifiso kuphela. Akuyona imiphumela yokucabanga okucacile; abanalo ulwazi. Lokho abakuthatha njengolwazi lukaNkulunkulu noma ukusondela kuNkulunkulu kuxhumene njalo nezinto ezibonakalayo, ukuzwa, ukunambitha noma ukuhogela, okuyizinzwa-hhayi ze-Self, noma ze-Intelligence.
Imvelo: ngumshini owakhiwe ngokuphelele ngamayunithi angenakho ukuhlakanipha; amayunithi azi njengemisebenzi yawo kuphela.
Isidingo: ukudalelwa, isenzo esicindezelayo, imvamisa esheshayo, lapho kungekho ukuphunyuka konkulunkulu noma amadoda.
I-Noetic: Lokho okungokwolwazi noma okuhlobene nolwazi.
Inombolo: iyodwa, iyonke, njengombuthano, kuzo zonke izinombolo ezifakiwe.
Izinombolo: izimiso zokuba, ngokuqhubekayo kanye nokuhlobene nobumbano, Ubunye.
Enye: iyunithi, ubumbano noma konke, imvelaphi nokufakwa kwazo zonke izinombolo njengezingxenye zayo, ekunwetshweni noma ekuqedeni.
Ubunye: ubudlelwane obufanele bazo zonke izimiso nezingxenye
Umbono: ukwahlulelwa kumenyezelwa ngemuva kokucatshangelwa okufanele kwazo zonke izici zesihloko okukhulunywa ngaso.
Ithuba: yisikhathi esifanele noma esihle noma isimo noma indawo yezinyathelo zokufeza noma iyiphi inhloso enikeziwe futhi ethinta ikakhulukazi izidingo noma izidingo zabantu.
Pain: iqoqo lemizwa ephazamisayo njengenhlawulo yokucabanga okungalungile noma ukwenza, futhi kunikezwa isaziso kumenzi wokuzwa-kanye-nesifiso sokususa imbangela yaso.
Isifiso: kungukudinwa kwemizwa nezifiso eziphathelene nezinto noma izihloko ze-thesens.
Ukubekezela: uyaphikelela futhi uphikelela ngokucophelela ekufezeni isifiso noma inhloso.
Umzimba Ophelele: yisimo noma isimo okungukugcina, okuphelele; okungekho lutho olungalahleka, futhi okungekho lutho olungangezwa kukho. Unjalo-ke umzimba ophelele ocansini ongenabulili weTriune Self eMbusweni we
Umuntu: kungumzimba womuntu odidiyelwe, imaskhi, ngaphakathi futhi lapho umenzi wesifiso-kanye nomuzwa ofanayo ecabanga futhi akhulume futhi enze.
Ithemba: isimo sengqondo esiveliswa ukubonwa noma inkolelo yokuthi izifiso zabantu azikwazi ukwaneliswa; ukuthi abantu nomhlaba bangaphandle ngokuhlangana; futhi, ukuthi akukho okufanele kwenziwe ngakho.
Hlela: yilokho okukhombisa indlela noma indlela esetshenziswa ngayo injongo.
Ubumnandi: ukugeleza kwemizwa kuvumelana nezinzwa, futhi kwanelisa umuzwa nesifiso.
Izinkondlo: ubuciko bokumodela ukuqonda umcabango nesigqi zibe amafomu noma amagama omusa noma amandla.
Iphoyinti, A: wukuthi akukho ubukhulu kepha kusuka lapho ubukhulu buvela khona. Iphuzu kungukuqala kwayo yonke into. Okungakhethiwe kanye nabonakalisiwe kuhlukaniswe iphuzu. Ukungabonakali kubonisa iphuzu. Ukubonakaliswa kubuyela kokungakhonjisiwe ngephuzu.
I-Poise: yisimo sokulingana, sokulingana kwengqondo nokulawulwa komzimba, lapho umuntu ecabanga futhi azizwe futhi enze ngokukhululeka, angaphazanyiswa yizimo noma izimo, noma imicabango noma izenzo zabanye.
Izinto: ziyizidingo ezinjengokudla, okokwembatha, indawo yokuhlala, kanye nezindlela zokugcina ubuntu bomuntu busesimweni sakho empilweni; ngaphezu kwalokhu nakuzo zonke ezinye izici bayizingibe, ukunakekelwa, kanye namaketanga.
Amandla, Ukuqwashisa: isifiso, esiletha izinguquko ngokwaso, noma esidala ushintsho kwezinye izinto.
I-Pranayama: yigama lesiSanskrit elingaphansi kokuchazwa okuningi. Ukusebenza okusebenzayo kusho ukulawula noma ukulawulwa kokuphefumula ngokuzivocavoca okunqunyiwe kokuhogela ukuhogela, ukumisa, ukukhipha umoya, ukumisa, nokuphinda uhogele inamba ethile yemizuliswano enjalo noma isikhathi esithile. Ku-Yoga Sutras yasePatanjali, ipranayama inikezwa njengeyesine ezinyathelweni noma ezigabeni eziyisishiyagalombili zeyoga. Inhloso ye-pranayama kuthiwa ukuphatha i-prana, noma ukulawula kwengqondo ekugxileni. Kodwa-ke, umkhuba we-pranayama uyadida futhi wehlule injongo, ngoba ukucabanga kuqondiswe noma ekuphefumuleni noma ku-prana, kanye nokuma ekuphefumuleni. Lokhu kucabanga nokuma ekuphefumuleni kuvimbela ukucabanga kwangempela. Ukukhanya kweConscious okusetshenziswe ekucabangeni — ukwazisa umcabangi ngendaba yokucabanga kwakhe — kuvinjelwe ukuba kungagcini ngokumisa ukugeleza kwemvelo nokujwayelekile kokuphefumula komzimba. Ukukhanya kweConscious kungena kuphela ezindaweni ezimbili ezingathathi hlangothi phakathi kokuqhamuka nokuqhuma kanye nokuqhamuka nokuqhuma. Ukumiswa kugcina ukukhanya. Ngakho-ke, akukho Khanya; akukho ukucabanga kwangempela; ayikho i-yoga yangempela noma inyunyana; akukho lwazi lwangempela.
Okuthandayo: ukuthandwa ngumuntu othile, indawo noma into ngokuzwa nokufisa, ngaphandle kokubheka okufanelekile noma isizathu; kuvimbela umbono wangempela wengqondo.
Ubandlululo: ukwahlulela umuntu, indawo noma into okuphikiswa imizwa kanye nesifiso, ngaphandle kokubheka, noma kungakhathalekile, kulungile noma isizathu. Ubandlululo luvimbela ukwahlulela okulungile nobulungisa.
Isimiso: kungukuhambisa okuvela kuyo yonke imigomo okuyikho nokuthi kungahlukaniswa ngayo.
Isimiso, A: ingabe lokho kusisekelo entweni okwakukhona ngayo, kwaba yilokho esiyikho, futhi nokuthi isimo sayo singaziwa kanjani ukuthi sikuphi.
Inqubekela phambili: ngukuqhubeka kokukhula komthamo wokuqaphela, nasemandleni okusebenzisa kahle lokho umuntu akwaziyo.
Ukujeziswa: inhlawulo yesenzo esingalungile. Akuhloselwe ukubangela ukuhlushwa nokuhlupheka kulowo ojezisiwe; kuhloselwe ukufundisa lowo ojeziswayo ukuthi angeke enze okubi ngaphandle kokuhlupheka, ngokushesha noma sekwephuzile, imiphumela yobubi.
Injongo: yisisusa esiqondisayo emzamweni njengento esheshayo, umuntu alwela yona, noma isihloko sokuqala okufanele saziwe; kungukuqondisa okwazi ngamandla, inhloso ngamazwi noma ngezenzo, ukufezeka komcabango kanye nomzamo, ukuphela kokutholwa.
Quality: izinga lokuqhakambisa elakhelwe esimweni nasekusebenzeni kwento.
Iqiniso, A: iyunithi njengoba injalo, ayinamathambo, into uqobo lwayo; lokho umuntu akuzwayo noma akwaziyo, kumbuso noma endizeni okukuyo, ngaphandle kokucabanga noma okuhlobene nanoma yini enye ngaphandle kwaleyo.
Iqiniso, Isihlobo: ukuqhubeka kwamaqiniso noma izinto nokuhlobana kwazo, kwesinye isimo nasesindizeni lapho zigcinwa khona.
Iqiniso, Ekugcineni Ukwazi, ukungaguquki futhi ngokuphelele; ubukhona bokuqwashisa ngaphakathi nangaphakathi kuyo yonke inhlobo yemvelo kanye ne-Triune Self and Intelligence kulo lonke isikhathi nendawo ku-Phakade, ngesikhathi sonke sokuqhubeka kwenqubekela phambili yalo njalo ngamazinga aphakeme wokuqashelwa kuze kube yilapho injalo futhi njengoConsciousness .
Realm of Permanence, The: ligcwele phantasmagoria yalelizwe lesintu lokuzalwa nokufa, njengokukhanya kwelanga kudlula emoyeni esiwuphefumulayo. Kepha umuntu ofayo akaboni futhi uqonda i-Realm njengoba nje esibona noma esikuqonda ukukhanya kwelanga. Isizathu ukuthi izinzwa nemibono kungalingani, futhi akufani nezinto izinto nesikhathi nokufa ezingeke zithinte. Kepha i-Realm of Permanence iyasukuma futhi ivikele umhlaba wesintu ekubhujisweni ngokuphelele, njengoba ukukhanya kwelanga kwenza impilo nokukhula kwezinto eziphilayo. Umuntu owaziyo emzimbeni uzokuqonda futhi akubone okuyiRealm of Permanence njengoba eqonda futhi azihlukanise nomzimba oguqukayo lapho efisa futhi ezizwa futhi ecabanga.
Isizathu: ungumhlaziyi, umlawuli kanye nejaji; Umphathi wezobulungiswa njengesenzo solwazi ngokomthetho wokulunga. Kuyimpendulo yemibuzo nezinkinga, isiqalo nesiphetho sokucabanga, kanye nesiqondisi solwazi.
Ukuphinda ube khona: ingabe ingxenye yokwenziwayo ishiya ezinye izingxenye zayo, ngokwesimo, ukuze iphinde ibe khona kude nayo, ngokwemvelo, lapho umzimba wesilwane usulungisiwe futhi ulungiselelwe ukuba ungene futhi uhlale impilo kulowo mzimba. Umzimba wesilwane wenziwe ngomumo ngokuwuqeqesha ukuze usebenzise izinzwa zawo, ukuhamba, nokuphindaphinda amagama aqeqeshelwe ukuwasebenzisa. Ukuthi ikwenza, njengepholiji, ngenkathi kuseyisilwane. Iba ngumuntu masisha lapho ihlakaniphile, njengoba kuboniswa yimibuzo ebuzayo, nokuthi iqondeni.
Ukuvuselelwa: ukuguqulwa kwesizukulwane, ukuzala komzimba. Lokhu kusho ukuthi: amaseli wegciwane emzimbeni awasetshenziswanga ukuletha omunye umzimba emhlabeni kepha ukuguqula nokunikeza impilo nempilo entsha emzimbeni. Lokhu kungenxa yokwakha kabusha umzimba kusuka emzimbeni wesilisa noma wesifazane ongaphelele ube umzimba ophelele futhi ophelele ongenabulili, owenziwa ngokungavusi imicabango yocansi noma ukucabanga ngezenzo zocansi; nangesimo sengqondo esiphikelelayo sokuvuselela umzimba womuntu esimeni sokuqala esiphelele lapho usuka khona.
Isihlobo: umsuka nokulandelana ebunyeni bokugcina lapho zonke amayunithi emvelo namayunithi ahlakaniphile ne-Intelligences ahlobene ku-Conscious Sameness.
Inkolo: umucu owodwa noma womane wezakhi zemvelo, njengomlilo noma umoya noma amanzi noma umhlaba, ngokusebenzisa izinzwa zomzimba zokubona, ukuzwa, ukunambitha, noma ukuhogela, okubamba noma ukubopha okwenzayo emzimbeni emuva imvelo. Lokhu kwenziwa ngemicabango nangezenzo ngokukhonza nangeminikelo yokushiswa nezingoma nangezifafaza noma ngokucwiliswa emanzini nangempepho kunkulunkulu oyedwa noma abaningi bezakhi zomlilo, umoya, amanzi, noma umhlaba.
Isibopho: kuya ngesisekelo sokwazi okulungile nokungalungile; kungukuthembela nokwethemba okungabekwa kokukodwa ukwenza konke akwenza esikhathini esidlule nanamuhla akwenzile, noma azokwenza, ngokuzayo, azibhekele. Ukuzibophezela kufaka ukwethembeka nokuba neqiniso, ukuhlonishwa nokuthenjwa nezinye izici ezifana nokwakha umlingiswa oqinile nongesabi, ogama lakhe lithembeke kakhulu kunenkontileka esemthethweni.
Uvuko: inencazelo emibili. Owokuqala ukuhlanganiswa ndawonye kwemizwa emine kanye nokuhlanganiswa komzimba wokuphila kwangaphambilini, okwasatshalaliswa endalweni emva kokufa kwayo, nokwakhiwa kabusha ngendlela yokuphefumula komzimba wenyama omusha ukukhonza njengendawo yokuhlala yenza ngokubuyela kwayo emhlabeni. Incazelo yesibili neyangempela ngukuthi owenzayo emzimbeni wendoda noma kowesifazane uvuselela umzimba wobulili kusukela kowesilisa noma kowesifazane ongaphelele okuwukuthi, emzimbeni lapho okubalulekile kwalaba bobabili ubulili buhlanganiswa emzimbeni owodwa ophelele bese kubuyiselwa, kuvuswe , esimweni sayo sangaphambili nesokuqala nesingafi sokuphelela.
Revenge: kuyisifiso sokulambela ukulimaza omunye ngokuziphindiselela futhi njengesijeziso sobubi bangempela noma obucatshangelwe bahlupheka, nokwanelisa isifiso sokuziphindisela.
Isigqi: umlingiswa nencazelo yomcabango ovezwe ngokulinganisa noma ukunyakaza ngomsindo noma ngesimo, noma ngezimpawu noma amagama abhaliwe.
Kwesokudla: isamba solwazi lokuthi yimuphi umuntu owaziyo, njengomthetho wezenzo zakhe ngaphakathi.
Ukulunga: iyindinganiso yokucabanga nokwenza, njengoba umthetho obekiwe kanye nenqubo yokuziphatha, kumenzi wokuzwa kanye nesifiso emzimbeni. Itholakala enhliziyweni.
Usizi: kungukudangala komoya ngokuzwa nje.
Ukuzenzela, Okuphakeme: ingabe isifiso noma izifiso umuntu azaziyo ukuthi ziphakeme, ngaphezulu, eziphakeme kunezifiso, zenyama, eziwubala nezingasho lutho empilweni yakhe yansuku zonke. Ukuzithemba okuphakeme akuyona ukuhlukaniswa
isifiso kumuntu, kepha umuntu ucabanga ngesiqu esiphakeme ngoba, njengesifiso, kuhlobene nobugovu bomuntu owazi i-Triune Self yakhe, yingakho umthombo wangempela wesifiso somuntu “we-High Higher.”
Ukuzikhohlisa: Umbuso lapho umenzi ebeka khona ngokuvumela ukuheha noma ukuphamba, ukuthanda noma ukukhetha, ukuthonya ukucabanga.
Ukuzithanda: kungulwazi uqobo lwalo njengolwazi lwe-Triune Self.
Isinxephezelo: ngukuxhumana kanye nombono wamayunithi wemvelo kokuzizwa, ngokusebenzisa izinzwa nezinzwa zomzimba, okuholela ekuzweni, umuzwa, isifiso. Ukubuyiswa akuyona imizwa, imizwa, noma isifiso. Ngaphandle komzimba, umuzwa awunawo umuzwa. Ngenkathi umuzwa usesimweni somzimba kukhona ukusakazwa okungapheli kwamayunithi emvelo eza ngokusebenzisa izinzwa futhi kudlule emzimbeni njengokugcizelelwa kokuzizwa, kufana nokuvela kinki ephepheni. Njengoba ngaphandle kweyinki nephepha bekungeke kube nekhasi eliphrintiwe, ngakho-ke ngaphandle kokusakazwa kwamayunithi emvelo nokuzizwa bekungeke kube khona umuzwa. Yonke iminjunju nezinenjabulo nemizwelo, lonke injabulo namathemba nokwesaba, usizi, ubumnyama nokuphelelwa yithemba kuyimizwa, imiphumela yokuvezwa okwenziwe ekuzweni, ngokuxhumana neyunithi yemvelo. Kunjalo futhi nezimpendulo ngesifiso emibonweni eyenziwe ngomuzwa, njengokuzwela, ukuthokomala, ukuhaha, i-avarice, ukudlwengula, inkanuko, noma isifiso. Kodwa isifiso ngokwaso ngaphandle komzimba asikho kulezi, akukho ngaphezu kokuzwa umuzwa owenziwe kuso ngokuxhumana kwawo amayunithi wemvelo.
Imizwa Yomzimba: bangamanxusa emvelo enkantolo yomuntu; abamele izakhi ezine ezinkulu zomlilo, umoya, amanzi, nomhlaba, ezenziwe ngabantu njengokubona, ukuzwa, ukunambitheka nephunga lomzimba womuntu.
Umqondo: ngumbono ovezwa umuzwa nokucabanga maqondana nomuntu, indawo noma into.
Isimo Sengqondo: kungukuhlafunwa kokuzwa imizwa yamanga.
Ubulili: ziyizinto ezingaphandle emvelweni yemicabango yesifiso nomuzwa ophumela emizimbeni yabesilisa nabesifazane.
Sexuality: yisimo sokuluthwa kokuzizwa-nesifiso emzimbeni womuntu obhekene nezindlela kanye nezigaba zemvelo-madness noma ukudakwa kwemvelo.
Ukubona: iyunithi yomlilo, esebenza njengonxusa wento yomlilo yemvelo emzimbeni womuntu. Ukubona kungumgudu lapho i-fire element yemvelo nohlelo lokukhiqiza emzimbeni lusebenzelana. Ukubona iyunithi yemvelo elihlobanisa futhi lixhumanise izitho zohlelo lokuzala kanye nokusebenza njengokubona ngokuhlobana okufanele kwezitho zalo.
Ukuthula: kungulwazi ekuphindaphindweni: ukuzola okuqondayo ngaphandle kokunyakaza noma umsindo.
Isono: kungukucabanga nokwenza lokho umuntu azi ukuthi akulungile, kuphikisana nokulunga, lokho umuntu akwaziyo ukuthi kulungile. Ukuphambuka kulokho umuntu azi ukuthi kulungile, yisono. Kukhona izono ngokuzidela wena, abanye kanye nemvelo. Izinhlawulo zesono zibuhlungu, izifo, ukuhlupheka, futhi, ekugcineni, ukufa. Isono sokuqala umcabango, olandelwa yisenzo sobulili.
Ikhono: izinga lobuciko ekuvezeni lokho umuntu akucabangayo futhi akufisayo futhi akuzwayo.
Ukulala: ukuvumela ukuhamba ngesifiso nomuzwa womenzi, wohlelo lwezinzwa kanye nemizwa yomzimba emine, nokuziyela ngaphakathi ekulaleni okungaphuphi. Ukuyekiswa kulethwa ukwehla kwemisebenzi yomzimba ngenxa yesidingo sayo sokuphumula, imvelo yokulungisa imfucumfucu, kanye nesimo somzimba ngesikhathi sokungasebenzi komenzi. Lapho-ke umenzi usexhumene nemvelo futhi akakwazi ukubona, ukuzwa, ukuthinta noma ukuhogela.
Hlonipha: iyunithi le-element element yomhlaba, ummeleli wento yomhlaba emzimbeni womuntu. Ukumamatheka kungumhlaba lapho isakhi somhlaba semvelo kanye nesistimu yokugaya emzimbeni ihlangana futhi ixhumane. Izenzo ezibonakalayo ngokuzwa, ukuzwa ngokuzwa, ukunambitha izinto ngokuhogela, ukuhogela isenzo somzimba. Ukubona kungomlilo, ukuzwa i-airy, ukunambitha okumanzi, nokunuka iphunga lomhlabathi eliqinile. Ukumunca yisisekelo ezinye izinzwa ezintathu ezisebenza kuzo.
I-Somnambulism: ukuhambahamba lapho ulele ubuthongo obukhulu, ukwenza izinto ngomuntu obelele kungathi uvukile, futhi, ezimweni ezithile, ukwenza izinto umenzi ongeke azame ngenkathi ephapheme. I-Somnambulism ingumphumela wokucabanga nje kokuphaphama; futhi ukucabanga okunjalo kwenza ukuvela okuningana kufomu lokuphefumula. Bese kuthi ngesinye isikhathi ebuthongweni obukhulu lokho obekuphupha kusesimweni sokuvuka kwenziwa ngokuzenzekelayo yifomu lokuphefumula, ngokohlelo olubhalwe yi-somnambulist.
Somnambulist, A: ungumhambi wokulala, onomqondo ongokomzimba futhi omzimba wakhe omfushane nomoya ophefumulayo unengqondo futhi ungaphansi kokuphakanyiswa; umuntu ocabanga ngalokho angathanda ukukwenza kodwa esaba ukukwenza. Izinto acabange ngazo ephusheni losuku esimweni sokuphaphama kamuva zifakwa kumqondo wakhe wokuphefumula lapho elele. Kepha, lapho uvuka, akaboni ukuthi umzimba wakhe wenzeni ukuthi ulale.
Umphefumlo: Okungenamkhawulo okuthile kwezinkolo namafilosofi, kwesinye isikhathi kuthiwe akunakufa futhi kwesinye isikhathi kuthiwe kungokufa, okuvela kuye nokudalelwa kwakho okuhlukahlukene, kepha obekulokhu kuwusizo lokuba yingxenye noma okuhlobene nomuntu umzimba. Kuyindlela noma uhlangothi lwento yokuphefumula yayo yonke imizimba yomuntu; uhlangothi lwayo olusebenzayo ngumoya.
Isikhala: into, okungakaze kubonwe muntu futhi kungazi lutho, okungumthombo nomthombo wayo yonke into eboniswayo. Akunamkhawulo, izingxenye, izifunda noma ubukhulu. Kungenxa yawo wonke amayunithi emvelo, lapho yonke ubukhulu ikhona futhi yonke imvelo ihamba futhi inayo.
Umoya: uhlangothi olusebenzayo lweyunithi yemvelo olunikeza amandla futhi lusebenze luye kolunye uhlangothi oluzenzakalelayo, olubizwa ngokuthi yindaba.
Ukusebenzelana Nemimoya:. okuvame ukubizwa ngokuthi komoya, kuhlobene nemvelo noma izinto zomlilo, umoya, amanzi, nomhlaba, futhi ngesinye isikhathi nezingxenye zomenzi womuntu osukile empilweni yasemhlabeni. Lokhu kuvame ukubonwa noma ukuxhumana nomuntu osezingeni eliphakeme. Ngokuhamba kancane, umzimba okhanyayo noma we-astral we-Medium yinto esetshenziswayo noma ifomu elisetshenziswe lapho kuvela lona, ​​futhi izinhlayiya ezivela emzimbeni wenyama ophakathi nezinhlayiya zezindikimba zababukeli zingadonswa ukuze zinikeze ukubukeka komzimba nesisindo . Ngaphandle kokungazi kanye nenkohliso ehlobene nezinto ezibonakala ngasese, izingxenye zalowo oshonile zingabuya futhi zibonakale zisetshenziswa ubuhlakani.
Izidakamizwa: isikhala esingenamkhawulo, ngaphandle kwezingxenye, singenangqondo, siyafana kulo lonke, konke okuqukethe “akukho lutho,” ukwakheka okungazi, okukhona, nokho, kwendalo yonke.
Impumelelo: kwenzeka ekugcwalisekeni kwenhloso.
I-Succubus: Uhlobo lwabesifazane olungabonakali luzama ukubuka i-obsess noma ukuba nobuhlobo bobulili nowesilisa phakathi nokulala. Njengama-incubus, ama-succubi anezinhlobo ezimbili, futhi ahluka ngesimo nenhloso. I-Incubi ne-succubi akufanele kubekezelelwe ngaphansi kwanoma iyiphi inkohliso. Zingalimaza kakhulu futhi zibangele ukuhlupheka okungafuneki kumuntu.
Symbol, A:kuyinto ebonakalayo emele isihloko esingabonakali umuntu okufanele acabange ngaso, uqobo lwaso noma maqondana nesinye isifundo.
Nambitha: iyunithi lezinto zamvelo zemvelo lithuthukela ezingeni lokusebenza njengesikhonzi sendalo emzimbeni womuntu. Ukunambitha ngumzila lapho isakhi samanzi sendalo kanye nesistimu yokujikeleza kwegazi emzimbeni isakazeka komunye. Ukunambitheka iyunithi yemvelo eligeleza futhi lihlobanise amayunithi omoya nomhlaba kumayunithi alo amanzi ukuze balungiselele ukujikeleza nokugaya kanye nezitho zalo ukuze kusebenze njengokunambitheka.
Umcabangi: Umcabangi wangempela we-Triune Self uphakathi kokwazi kwakhe, nalowo akwenzayo emzimbeni womuntu. Ucabanga ngomqondo wokulunga nangengqondo yokucabanga. Akukho kungabaza noma ukungabaza ekucabangeni kwayo, akukho kungqubuzana phakathi kokulunga kwayo nesizathu. Akwenzi amaphutha ekucabangeni kwayo; nokuthi icabanga ukuthi isebenza kanjani ngasikhathi sinye.
Umenzi-emzimbeni unamahloni futhi akagxilile ekucabangeni; imizwa-nesifiso-sayo asivumi ngaso sonke isikhathi ukuvumelana, futhi ukucabanga kwabo kulawulwa ngumqondo womzimba ocabanga ngezinzwa nangezinto zezinzwa. Futhi, esikhundleni sokuKhanya okucacile, ukucabanga kwenziwa ngokujwayelekile enkungwini futhi nokuKhanya kusakazeka enkungwini. Noma kunjalo, impucuko emhlabeni ingumphumela wokucabanga nemicabango eyenzile. Ngabe abanye babenzi bemizimba yabantu bangazi ukuthi bangukungafi abayikho, futhi nokulawula esikhundleni sokulawulwa yizingqondo zabo zomzimba, bangaguqula umhlaba ube yinsimu ngazo zonke izindlela ephakeme kune-egendary ipharadesi.
Ukucabanga: kungukubanjwa okuqinile kweConscious Light ngaphakathi kwesihloko sokucabanga. Kuyinqubo ye (1) ukukhethwa kwesihloko noma ukwakheka kombuzo; (2) ukuvula isibani seConscious kuso, okwenziwa ngokunikeza umuntu ukunakwa okungabhekisiwe kuyo; (3) ngokubamba ngokuqinile nokugxila kweConscious Light endabeni noma embuzweni; futhi (4) ngokuletha ukuKhanya ukuthi kugxile esifundweni njengephuzu. Lapho iConscious Light igxile ephuzwini, iphuzu livula ukugcwala kwalo lonke ulwazi lwendaba ekhethiwe noma impendulo yombuzo owakhiwe. Ukucabanga kuthinta izihloko ngokuya ngokwenzeka kwazo nangokulunga namandla e
Ukucabanga, Kuyasebenza: inhloso yokucabanga ngendaba ethile, futhi kungumzamo wokubamba i-Conscious Light ngaphakathi kuleyo ndaba, kuze kube yilapho leyo ndaba yaziwa, noma kuze kube yilapho ukucabanga kuphazamiseka noma kuphendukela komunye isifundo.
Ukucabanga, Passive: kungukucabanga okwenziwa ngaphandle kwenhloso ethile; kuqalwa ngumcabango odlulayo noma umbono wezinzwa; ukudlala okungenamsebenzi noma ukuphupha kosuku okubandakanya umqondo owodwa noma womathathu womenzi wokukhanya okunjalo
njengoba kungenzeka kube semkhathini wemilingo.
Ukucabanga Okungadali Imicabango, Okungukuthi, Isiphelo: Kungani umuntu ecabanga? Ucabanga ngoba izinzwa zakhe zimphoqa ukuthi acabange, ngezinto zezinzwa, ngabantu nezehlakalo, kanye nokuphendula kwakhe kubo. Futhi lapho ecabanga ukuthi ufuna ukuba yinto, enze okuthile, noma athole noma abe nokuthile. Ufuna! Futhi uma efuna uzinamathela kanye nokuKhanya emcabangweni, kulokho akufunayo; udale umcabango. Lokho kusho ukuthi yena oKhanyayo emcabangweni wakhe uhlanganiswe nesifiso sakhe esifunayo, endabeni nasenkambweni yesenzo, noma entweni noma entweni ayifunayo. Ngalowo mcabango unamathisele futhi wabopha ukuKhanya kanye naye. Ukuphela kwendlela angakhulula ngayo ukukhanya kanye naye kuleso sibopho ukunganamatheliswa; okungukuthi, kufanele alinganise umcabango ombophileyo, ngokukhulula ukuKhanya nesifiso sakhe entweni ekuyo Ufuna. Ukwenza lokhu, ngokuvamile kuthatha izimpilo ezingenakubalwa, iminyaka, ukufunda, ukuqonda; ukuqonda ukuthi akakwazi ukwenza kahle futhi ngokukhululeka ngento aboshelwe kuyo futhi aboshwe kuyo, njengoba engenza uma ebenganamathiselwe, engaboshiwe. Isifiso sakho wena! Isenzo noma into oyifunayo akuyona wena. Uma unamathisela futhi uzibophezele kukho ngomcabango, awukwazi ukwenza kahle futhi uma ungabophekile futhi ukhululekile ukwenza ngaphandle kokunamathiselwe. Ngakho-ke, ukucabanga okungadali imicabango kungukukhululeka ekucabangeni, nasekungafuni, ukubamba, kepha ukwenza, ukwenza, ukubamba, ngaphandle kokubophezeleka esenzweni, kulokho onakho, kulokho bamba. Lokho wukuthi, ukucabanga ngenkululeko. Lapho-ke ungacabanga kahle, ngokuKhanya okucacile, nangamandla.
Umcabango, A: uyisidalwa esiphilayo esisemvelo, esiswini futhi esifakazelwe enhliziyweni ngokuzwa nesifiso ngeConscious Light, esikhuliselwe ngaphakathi futhi esikhishwe ngengqondo, futhi esizophumela ngaphandle njengesenzo, into noma umcimbi, kaninginingi, kuze kube alinganiselwe. Umzali womcabango unesibopho sayo yonke imiphumela evela kuyo kuze kube yilowo mcabango ulinganiselwe; okungukuthi, ngamava aqhamuka ngaphandle, okufundwe kulokho okwenzeka, umenzi
kukhulula ukuKhanya kanye nomuzwa-kanye nesifiso entweni yemvelo ababeboshelwe kuyo, futhi kanjalo bathole ulwazi.
Ukucabanga, Ukulinganisa: Ukucabanga kususa ukuKhanya emcabangweni lapho umuzwa nesifiso sivumelana futhi bobabili bevumelana ngokuzimela mayelana nesenzo, into noma umcimbi ofakazelwe u-I-ness. Lapho-ke ukucabanga kudlulisa futhi kubuyisele ukuKhanya emkhathini wemibono futhi umcabango ulinganisele, uyeka ukuba khona.
Ukucabanga, I-Balancing Factor ku: uphawu olugxotshwa unembeza emcabangweni njengophawu lwalo lokungamukeli ngesikhathi sokudalwa komqondo ngozizwa nangesifiso. Ngalo lonke ushintsho nangaphandle komcabango, uphawu luhlala luze lilinganiswe kulowo mcabango. Umaki nomcabango kuyanyamalala lapho umcabango ulinganiselwe.
Ukucabanga, Ukubusa: Umqondo owengamelayo ngesikhathi sokufa umcabango wokubusa wokuphila okulandelayo emhlabeni. Kungashintshwa, kepha ngenkathi kubusa kuthonya ukucabanga kwakhe, kusiza ekukhetheni abangane kanye nabaholayo
noma umethula kwabanye bomcabango ofanayo. Imvamisa ukunquma ekukhetheni umsebenzi noma ibhizinisi noma umsebenzi angawulandela empilweni yonke. Ngenkathi kusaqhubeka ukucabanga kwakhe kokubusa kuyasinciphisa isimo sakhe futhi unikeze
umbala ngombono wakhe ngokuphila.
Imicabango, Ukuvakasha: Imicabango iyajikeleza; baxakile njengabazali babo; bavakashelwa yilowo nalowo emoyeni wesibhakabhaka owenziwe ngabantu, ngenxa yezinhloso nezinto ezenzelwe zona, futhi bahlangana emkhathini wezintshisakalo ezifanayo zabantu abadalelwa zona. Imicabango iyimbangela eyinhloko yomhlangano nokuhlangana kwabantu; ukufana kwemicabango yabo kudonsela abantu ndawonye.
isikhathi: ukuguqulwa kwamayunithi noma amasunithi amayunithi ezihlobeni zawo. Kunezinhlobo eziningi zesikhathi emhlabeni nasemazweni ahlukahlukene. Isibonelo: isisindo samayunithi abumba ilanga, inyanga, umhlaba, kuguquka kubudlelwane babo, kulinganiswa njengesikhathi selanga, isikhathi senyanga, isikhathi somhlaba.
Ukufuduka: inqubo elandela ukuhlangana kwamagciwane owesilisa nowesifazane womuntu ngommoya wokuphefumula, umphefumulo womzimba wesikhathi esizayo, lapho kukhulelwa. Kuyinto ukufuduka nokuhlangana ndawonye ngokulandelana kwazo zonke
izakhi zokuphila nokuphila kanye nezinhlobo zokuthayipha ezivela kumbuso wezimbiwa nezemifino nezilwane zemvelo lapho zasatshalaliswa khona ngemuva kokufa, futhi zihambisana futhi zazakhela umzimba omusha womuntu, umkhathi omusha, ngokusho komphefumlo, isimo somzimba yiba, futhi uyilungiselela ukuba yindawo yokuhlala yenyama yokubuya nokuvela kabusha kwengxenye yokwenza ye-Triune Self. Ukufuduka kwezigodi zomzimba kungaphezu kwale mibuso
yemvelo: amaminerali noma okuyisisekelo, isitshalo noma imifino, nesilwane, sibe yingane. Lokho kungukuphela kokudluliselwa komphefumlo, ifomu, elenzelwe umuntu, enqamula noma ngokusebenzisa imibuso emithathu yendalo kumuntu.
I-Triune Self: Lowo owaziyo ongabonakali futhi ongafiyo; ubunikazi bayo nengxenye yolwazi njengomazi; ukulunga kwayo nengxenye yayo njengokucabanga, kuPhakade; futhi, isifiso sayo nokuzizwa kwayo kuyingxenye yokwenza, ekhona ngezikhathi ezithile emhlabeni.
I-Triune Self of the Worlds, i: kunjengokusho komhlaba we-Triest Selves, futhi umi maqondana ne-Intelligence Ephakeme njengoba kwenza i-Triune Self nobuhlakani bayo.
Ithemba: kuyinkolelo eyisisekelo yokwethembeka nokuba neqiniso kwabanye abantu, ngoba kukhona ukwethembeka okujulile okuhleliwe kulowo othembayo. Lapho umuntu edumazeka ngenxa yokuthembela kwakhe ngokungafanele kwelinye, kufanele
ungalahli ukuzithemba kuye, kepha kufanele afunde ukuqaphela, aqaphele ukuthi yini futhi athembela kuye.
Ukuba neqiniso:yisifiso sokucabanga nokukhuluma ngokuqondile ngezinto ngaphandle kokuhlose ukuqamba amanga noma ukuveza amanga ngendlela engafanele leyo nto oyicabangile. Vele, kuyaqondakala ukuthi umuntu akufanele ambulele
ukuphrinta noma ukwazi abantu konke akwazi.
izinhlobo: Uhlobo uhlobo lokuqala noma ukuqala kwefomu, futhi ifomu ukufakwa nokuqedwa kohlobo. Imicabango yizinhlobo zezilwane nezinto futhi yakhiwa njengokubonisa kwemizwa yabantu nezifiso esikrinini semvelo.
Ukuqonda: ukuqonda nokuzwa ukuthi yiziphi izinto okungokwazo, ukuthi ubudlelwano babo bunjani, nokuqonda ukuthi kungani zinjalo futhi zihlobene kangaka.
Iyunithi, A: yinto engahlukaniseki futhi engenakucishwa, indingilizi, enecala elingabonakali, njengoba kuboniswe ububanzi obuvundlile. Uhlangothi olubonakalisiwe lunohlangothi olusebenzayo nolungenzi lutho, njengoba kukhonjiswa umugqa ophakathi nendawo ume mpo. Izinguquko ezenziwe ngokusebenzisana kwazo zenziwa ngokuba khona kokungabonakali kuzo zombili. Yonke iyunithi inamandla okuba munye neqiniso lokugcina — Ukuqwashisa — ngokuqhubeka kwayo njalo ukuze ikwazi njalo
Amayunithi: Ukuqeqeshwa kanye nemfundo yamayunithi kususelwa esicelweni sokuthi yonke indawo yemvelo inamandla okuthola ubuhlakani. Imfundo yalolu phiko yenziwa e-University of Laws. A University of Laws a
ophelele, umzimba ongekho ocansini we-Realm of Permanence, olawulwa umenzi nomcabangi futhi owazi ngeTruneune Self ephelele ngokuya nge-Order ye-Progression engapheli.
Isifundo seyunithi engaqondakali yemvelo siqukethe ukwanda kokuqaphela ngokulandelanayo njengomsebenzi waso kuwo wonke ama-degree kuze kube yilapho sithola iziqu eNyuvesi, ukuze sibe yunithi ehlakaniphile engaphezu kwemvelo.
Amadigri asemzimbeni ophelele yilawa: amayunithi okwesikhashana, amayunithi womqambi, nezindawo zomqondo, futhi ekugcineni kukhona uphiko lwefomu lokuphefumula, eliqeqeshelwa ukuphothulwa emvelweni futhi ube yunithi ehlakaniphile eyazi as uqobo lwayo futhi of konke
izinto nemithetho. Amayunithi wesikhashana yibo abahlanganisi abenziwe futhi basebenze njengesakhiwo kuzo zonke izingxenye zomthetho weYunivesithi. Ngesikhathi sokuhlala kwabo isikhashana banikwa amandla futhi bakhokhiswe njengemithetho futhi bathunyelwe ukuba yimithetho yokusebenza yendalo. Amayunithi wezinzwa angamanxusa aqhamuka ezintweni ezinkulu umlilo, umoya, amanzi nomhlaba, ezizohola izinqubo ezine — ezikhiqizayo, zokuphefumula, zokujikeleza nokugaya — izitho zazo
izingxenye ezisebenzayo. Iyunithi lokuphefumula lihlanganisa izinzwa nezinhlelo nezitho zomzimba kumthethosisekelo osebenzayo womzimba.
Amayunithi, Imvelo: bahlukaniswa ngokuba ngabazi as imisebenzi yabo kuphela. Amayunithi emvelo awazi of noma yini. Kunezinhlobo ezine: amayunithi wamahhala angakhawulelwe futhi anganamatheli kwamanye amayunithi ngobukhulu noma ngesakhiwo; amayunithi wesikhashana, ahlanganiswe noma ahlanganisiwe esakhiweni noma osisikhathi okwesikhashana abese edlula; amayunithi womqambi, aqamba futhi abambe amayunithi okwesikhashana okwesikhashana; futhi amayunithi wokuqonda, njengokubona, ukuzwa, ukunambitheka, nephunga, elilawula noma elilawula izinqubo ezine zomzimba womuntu. Onke amayunithi emvelo awanangqondo.
Iyunithi, Isitho: Ngeyunithi elilodwa lokuxhumanisa iseli iyunithi lomzimba ligcinana ngokuhlobene nawo wonke amaseli amalungu alo ahlanganiswe ngawo, ukuze likwazi ukwenza umsebenzi walo noma imisebenzi elixhumanisa nezinye izitho kwelinye lezinhlelo ezine zomzimba kungokwakho.
Amayunithi, Ukuzwa: Ingabe izixhumanisi zemvelo ezine zokuxhuma emzimbeni ezixhuma futhi zihambisane nemizwa emine yokubona, yokuzwa, yokunambitha neyokuhogela, kanye nezinqubo zazo ezine ezihambelanayo: ukubona nge-generative, ukuzwa ngokuphefumula, ukunambitheka kokujikeleza, nokuhogela nge okugaya ukudla; futhi, nezinto ezine: umlilo, umoya, amanzi nomhlaba.
Inkinga: kungukungabonakali nokungahloniphi okungezona zonke izinto noma izikhundla nezikhathi ezifiswayo emhlabeni, uma kuqhathaniswa ne-Realm of Permanence; ukuqonda ukuqonda ukungabi nalusizo kokulwela i
ukuthokozela ukuthandwa, kanye nenjabulo nokubukeka kwezimo, lapho ukwehlukana kwabo kufaniswa namandla entando ekusebenzeni kokwethembeka nokuba neqiniso.
Amawayile, Cloaks of: lapha okuthiwa,, izifiso ezimbi nezingcolile zomenzi empilweni yomuntu, ethi ngemuva kokufa kwayo kubangele ukuhlupheka ngenkathi umenzi uzama ukuhlukanisa nabo. Isisekelo sifisa njengengubo yemikhuba emibi nayo ihlupheka,
ngoba abanazo izindlela zokuzitika ngaphandle komzimba womuntu. Ngakho-ke bavame ukufuna umkhathi womuntu onezifiso ezifana nezakhe futhi ozimisele noma oyisisulu sokufuna ukudakwa noma ubugebengu.
Ubuhle: kungamandla, amandla wentando, ekusetshenzisweni kokwethembeka nokuba neqiniso.
Intando, Mahhala: Intando ingabe isifiso esikhulu, somzuzu, wesikhathi esithile, noma sempilo. Ibusa izifiso zayo eziphikisanayo futhi ingahle ibuse izifiso zabanye. Isifiso ngamandla aziwayo ngaphakathi, angaletha ushintsho ngokwalo noma olushintsha ezinye izinto. Asikho isifiso esisebantwini esikhululekile, ngoba sinamathiselwe noma sinamathela ezintweni zezinzwa lapho sicabanga. Isifiso esisodwa singalawula noma silawulwe esinye isifiso, kepha asikho isifiso esingashintsha esinye isifiso noma siphoqelelwe ukuthi siziguqule ngokwaso. Awekho amandla ngaphandle kwawakhe angawaguqula. Isifiso singanqotshwa, sichotshozwe, futhi senziwe ngaphansi, kepha ngeke senziwe ukuthi siziguqule ngaphandle kokuthi sikhethe futhi sithanda ukuguquka. Kukhululekile ukukhetha ukuthi kuzokhetha noma ngeke kuguquke uqobo. Amandla wokukhetha ukuthi izohlala inamathele kule nto noma kuleya nto, noma ukuthi izoyiyeka yini leyo nto futhi ingatholwa, iphuzu layo lenkululeko, iphuzu lenkululeko ukuthi zonke izifiso zinayo futhi inazo. Kungangeza iphuzu layo endaweni yenkululeko ngokuzimisela ukuba, ukwenza, noma ukuba nayo, ngaphandle kokuzinamathisela kulokho okuthanda ukuba yikho, ukukwenza, noma ukuba nakho. Lapho le ntando icabanga ngaphandle kokunamathela kulokho elikucabangayo, kukhululekile, futhi kunenkululeko. Enkululekweni, ingaba noma yenza noma sibe nalokho esithanda ukuba yikho noma esifuna ukukwenza noma inqobo, inqobo nje uma ihlala ingasasebenzi. Inkululeko yokuzikhethela ingeke isetshenziswe.
Ukuhlakanipha: ukusetshenziswa okulungile kolwazi.
Umsebenzi: Kungumsebenzi wengqondo noma womzimba, izindlela nendlela ezenziwa ngayo izinhloso.
Umhlaba, Noetic: akuwona umhlaba wemvelo-ndaba; yindawo ehlakaniphile noma ulwazi lwe-Realm of Permanence, ubumbano olwakhiwe ngemibhakabhaka emibhakabhaka yawo wonke ama-Triune Selves nemithetho elawula imvelo. Yilwazi olungaguquki olungapheli oluphathelene nabo bonke abakwaStrune Selves nangokuphathelene nalo lonke oludala, olukhona manje nolunqunywe njengekusasa lomhlaba womhlaba. Ulwazi oluqongelela nolushintsha njalo lwezinzwa emhlabeni wesintu ngokubona nangokuhlola ngeke lungeze emhlabeni wolwazi. Lokhu kufana nemikhiqizo yehlobo nobusika, okuza nokuhamba. Umhlaba wolwazi
isamba solwazi lwabo bonke abakwaTestune Selves, futhi ulwazi lwabo bonke luyatholakala ku-Triune Self ngayinye.
Okungalungile: lowo mcabango noma isenzo okuwukusuka kulokho umuntu akwaziyo ukuthi kulungile.